ကွုံခဲတဲ့ညတည – My Blog
ကြှနျတျော အိမျမကျထဲမှာ နတျသမီးလေး တဈပါး ကြှနျတျောငပဲကိုလာကိုငျပွီး စုပျပေးနတေယျ ပွီးတော့ ညှဈလိုကျသလိုခံစားမိတော့ အိမျမကျကလနျ့နိုးလာတယျ အပွငျမှာလဲ တဈယောကျယောကျလာကိုငျနေ သလိုခံစားမိတော့ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ငါဘယျရောကျနတောလဲ အျော မှတျမိပွီ ငါသူငယျခငျြး အိမျမှာ စာလာကကျြတာဘဲ ဒါဆို “ဟာ…အမ” “မောငျလေး နိုးပွီလား ရှူးတိုးတိုး” သူပွောမှ ဘေးမှာ အိပျနတေဲ့ကောငျကွညျ့လိုကျတော့ ကြှနျတျောသူငယျခငျြး အိပျနတောသိုးနတောဘဲ ပုဆိုးကလဲ ခေါငျးမှာ စှတျလို့ “ လာလာ မောငျလေး မ အခနျးလိုကျခဲ့” ကြှနျတျော တှဝေသှေားတယျ အောကျက ကောငျကလဲ ထောငျလို့ စိတျကလဲပါနပွေီ ချေါနတောလဲ ကြှနျတျောသူငယျခငျြးရဲ့ အမ စိတျကို ဒှနျတှဲနတေဲ့အခြိနျ မမ ရဲ့လကျကလဲ ဂှငျးတိုကျပေးနတေော့ လူပြိုရိုငျးလေး ကြှနျတျော ဘယျလိုမှ မနနေိုငျတော့ဘူး “ ဘာတှစေဉျးစားနတောလဲ မောငျလေး။
ဗြာ….ဘာမှ မဟုတျပါဘူး တဈခါမှ မလုပျဘူးလို့ ခုတောငျ ထှကျခငျြနလေို့ ထှကျတော့မယျ အမ အား……မရတော့ဘူး ထှကျပွီ ထှကျပွီ အီး…..” သုတျထှကျလာတော့ မမ က ပါးစပျနဲ့စုပျ၍ အဆကျမပကျြကှငျးတိုကျပေးရငျး ထှကျသမြှ သုတျတှကေို အကုနျ စုပျယူမွိုခလြိုကျတယျ “ကောငျးလိုကျတာဗြာ တဈခါမှ အဲလိုမကောငျဖူးဘူး “ “ ဒါဆို မောငျလေး အရငျက လုပျဖူးတယျပေါ့” “ အာ အဲလိုမဟုတျဘူး ကိုယျ့ပါသာ ဘဲလုပျတာ အမ လုပျပေးသလိုမကောငျးဘူး…အဲဒါပွောတာပါ” “ ဒါဆို ဒီထကျကောငျးအောငျ အမ လုပျပေးမယျ အမ အခနျးလိုကျခဲ့..လာ”ဘာပွောကောငျးမလဲ စိတျထဲကသာ စိုးရိနျနတော လူက ထ လိုကျနပွေီ ပွီးမှ သတိရတယျ “အာ…အမ အမရဲ့အခနျးထဲမှ အမသူငယျခငျြးတှနေဲ့လေ” “ အဲဒါဘာဖွဈလဲ မောငျလေးက မလိုကျခငျြဘူးလား” “ အာ…ဟုတျပါဘူး ကြှနျတျောဆိုလိုတာက သူတို့နဲ့ဖွဈပါ့မလားလို့” “ အျောမောငျလေးရယျ အမ သူငယျခငျြးတှလေဲ အမလိုဘဲ စမျးကွညျ့ခငျြနတော။
ဘာလဲ ငါ့မောငျက မကွိုကျလို့လား ….. အာ..မဟုတျပါဘူးဗြာ တခါမှ အတှအေ့ကွုံမရှိတော့ ကြှနျတျောလဲ စမျးခငျြနတော လူမြားတော့ စိတျလှုပျရှားဖို့တော့ ကောငျးတယျနျော” သူငယျခငျြးကို ပွနျကွညျ့တော့ လောကကွီးထဲ ဘာတှဖွေဈနလေဲဆိုတာ မသိနိုငျအောငျ အိပျမောကြ နလေရေဲ့ ငါသူအမ အခနျးလိုကျသှားတာ ငါ့မြား စိတျဆိုးနမေလားဘဲ အငျး.. ဒါပမေဲ့သူအမ အရငျး မဟုတျဘူးလဲ ကွားတယျဘာဘဲဖွဈဖွဈလေ စားရကံ ကွုံလာတော့လဲ ရှလှတျ…… အျော ပွောရအုံးမယျ ကြှနျတျော နာမညျက ကောငျးထကျ သူငယျခငျြးက ကြျောထကျ တဲ့ အဲဒါကွောငျ့ တှဲမိနလေားမသိပါဘူး… ခငျတဲ့သူတှကေတော့ ကောငျးကောငျးနဲ့ ကြျောကြျောလို့ချေါတယျ ကြျောကြေျာ့ အမကတော့ မငွိမျးအိ မငွိမျးလို့ဘဲ ချေါတယျ “ဟာ… ငါဒီနအေိ့မျမကျ မကျနတောလား” “ခဈခဈ…ခဈခဈ….” ပါးစပျက တောငျ ယောငျပွီးထှကျသှားတော့ မငွိမျးက ဘေးကနရေယျနတေယျ မယောငျဘဲ နနေိုငျရိုးလား။
အခနျးထဲမှာ တှလေို့ကျရတာက နတျသမီးတှလေားမှတျရတယျ မငွိမျးသူငယျခငျြးတှေ ညဝတျ အငျးကြီ လေး တှနေဲ့ ဆကျဆီ ကနြတေော့ လူရော စိတျရော ငယျပါ ရော ထ လာပါလရေော သူတို့လဲ ကြှနျတျော ကို မွငျရော “ ခဈခဈ….ခဈ… မငွိမျး နငျ တယျတျောပါလား ဘယျလို စညျးရုံးလာတာလဲ “ “ ကောငျမတှေ နငျတို့ဘဲ စမျးခငျြလှကွညျရဲ့ဆိုလို့ ငါ အရှကျမရှိတဲ့ မကျြနှာနဲ့ ပါအောငျ ချေါလာတာနျော “ သူတို့ကအဲလိုပွောနတေော့ ကြှနျတျော မကျြနှာ ဘယျနားထားရမှနျးမသိဘူး ရှကျလိုကျတာလဲ လှနျရော သူတို့ ကလဲ ကြှနျတျောကို စိုကျကွညျ့နတေယျ “ ကဲ မောငျလေး ရှကျမနနေဲ့တော့ အခနျးထဲ ဝငျလေ အမတို့ရှကျဖို့လဲ ထားအုံး “ “ ဟုတျ” “ ဘာဟုတျလဲ” “ အဲ..” “ ကဲပါ မငွိမျးရယျ စ မနပေါနဲ့တော့ သူရှကျပွီး ထှကျပွေးသှားရငျ ငါတို့ အစီအစဉျတှေ ပကျြသှားပါအုံးမယျ” လို့ပွောလိုကျတာကတော့ အဝါရောငျ ဘောငျးဘီတိုအကွပျလေး ဝတျပွီး။
တငျလုံး ကဈြကဈြနဲ့ နို့ လုံးလုံးလေးနဲ့ ခြောတယျလို့ ပွောလို့ရတဲ့ တဈယောကျ နောကျတဈယောကျကတော့ တငျကွီးကွီး ကွီးတယျဆိုပမေဲ့ ခါးသေးသေးလေးနဲ့ ယောကျြားတိုငျး လညျပွနျကွညျ့ရတဲ့ ပုံနဲ့က ဇာပါးလေး ဝတျထားပွီး အတှငျးခံ အမဲရောငျ ဝမျးဆကျ လေးတောငျ မွငျနရေတယျ နောကျတဈယောကျ မငွိမျးကိုလဲ ကွညျ့အုံးလေ။ မငျးကွီးကွိုကျ ဘောဒီ လှလှနဲ့ ဆကျဆီ ကလြှတဲ့ သူ ကြှနျတျောမှာ သူတို့ကို ကွညျ့ပွီး အာခေါငျတှတေောငျ ခွောကျလို့ စတှေးတောငျ ခဏခဏ မြိုခြ နရေတယျ “ကဲ ကိုယျတျော စတှေးတှဘေဲ မြိုခြ မနနေဲ့ အမ မိတျဆကျပေးမယျ..လာ” ဆိုပွီး လကျဆှဲချေါ အခနျးထဲဝငျ တံခါး ပိတျပွီး စတငျမိတျဆကျပေးတယျ လုံးကဈြကဈြလေးနာမညျက မသေျောခိုငျ တဲ့ တငျးကွီးကွီး က ပနျးအိဝငျး တဲ့ “ဟုတျကဲ့ ခုလို မိတျလိုကျရတဲ့ အဲ.. ခုလို သိခှငျ့ရတဲ့ အတှကျအမြားကွီးဝမျးသာပါတယျဗြာ..” “ခဈခဈ…ခဈခဈ ..ခဈခဈ” မိတျဆကျပေးပွီးတော့ ဘာသံမှ မထှကျတော့ဘဲ။
တဈယောကျမကျြနှာ တဈယောကျကွညျ့ပွီး ဘယျက ဘယျလို စရမှနျးမသိတော့ဘဲ မငျသကျ နကွေရာမှ နဲနဲ သှကျသှကျလကျလကျ ရှိတဲ့ မသေျော က “ ကဲ..ဒီတိုငျးရပျနလေို့တော့ အခြိနျကုနျတာဘဲ အဖကျတငျမယျ စလိုကျကွစို့” စလိုကျကွစို့ ဆိုပငျမဲ့ ကြှနျတျောမှ ဘယျက ဘယျလိုစရမလဲ စဉျးစားနရေတယျ အိုဘာဖွဈဖွဈ ဆိုပွီး စမယျလုပျတုနျးရှိသေး ကုတငျပျေါက နှဈယောကျက တဈယောကျ နဲ့တဈယောကျ နနျးစုပျနကွေပွီ ကိုလဲ အားကမြခံ မငွိမျးဘကျလှညျ့ပွီး နှုတျခမျးကို လှမျးစှဲစုပျလိုကျတော့တယျ… နှုတျခမျးခွငျးစုပျနနျးနရောမှ လကျကလဲ နို့တှကေို အပျေါကနေ စုတျခပြေေးလိုကျ ဖငျကိုညှဈလိုကျလုပျ တဲ့အခြိနျမှာ မငွိမျးလဲ တဟငျးဟငျ ဖီးတကျလာပွီး “အငျးကြီတှေ ခြှတျလိုကျရအောငျ ကောငျးကောငျးရယျ…” “ဟုတျ..မငွိမျး” အငျးကြီတှေ အကုနျခြှတျပွီးတဲ့အခြိနျမှာတော့ အားလုံး ကိုယျစီ အောကျခံလေးတှသောကနျြတော့ တယျ ကြှနျတျောလဲ ဟိုနှဈယောကျကိုပါ ကွညျ့လိုကျတော့။
လားလား သူတို့က အောကျခံတောငျ မရှိတော့ဘူး မသေျော နို့လေးတှကေ လုံးလုံးလေး ရယျ အောကျက စောကျဖုတျအုံကလဲ အမှေးရေးရေးလေးတှေ လှလိုကျတာ အရညျလေးတှလေဲ စို့လို့ ပနျးအိ ကိုကွညျ့လိုကျတော့လဲ ပေါကျစီ နှဈလုံး တပျထားသလား အောကျမရေ့တယျ စောကျဖုတျကတော့ မှေးတျောတျောသနျနပွေီး တဈမြိုးကွညျ့လှနတောဘဲ “ကဲ..ကိုယျတျော ဒီတိုငျးရပျကွညျ့နမှောလား “ ဘေးလှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ လားလား သူလဲမခပေါလား ပေါငျတနျသှယျသှယျ ကွားမှာ အဖုတျမှေး ပါးပါးလေး နဲ့ မငွိမျးကို ကွညျ့ပွီး မနနေိုငျတော့ဘဲ အောကျက ငပဲက လဲအစှမျးကုနျ မာတောငျနပွေီး အတှငျးခံထဲမှ ရုနျးထှကျနခေငျြနပွေီလေ…ဒါကိုအလိုကျသိတဲ့ မငွိမျးက ဘောငျးဘီ ကိုဆှဲခြှတျလိုကျတယျ။ “အို….အဲ…ခဈ….” ဆိုပွီး ဘေးက နှဈယောကျက အသံထှကျလာတယျ “ငါတို့တော့ လူရှေးမှနျပွီ “ ဆိုပွီး မသေျော က ပွောလဲပွော အရညျလဲ့နတေဲ့ မကျြလုံးနဲ့ စိုကျကွညျ့နတေယျလေ။
ပနျးအိဆို ခုထိ ပါးစပျတောငျ မပိတျနိုငျဘဲ မငျသကျနပွေီး ကြှနျတျော ငပဲကို ဘဲ မကျြတောငျ မခကျ လိုကျကွညျ့နတေယျ အဲဒီအခြိနျမှာဘဲ မငွိမျးက ဒါငါ အရငျ ဆိုတဲ့ ပုံနဲ့ ကြှနျတျော ငပဲကို ပါးစပျနဲ့စုပျငုံလိုကျတော့ ကြှနျတျောမှာ “အား..” “ဘာလို့လဲ မောငျလေး နာလို့လား” “ ဟုတျဘူး ကောငျးလို့ ဆကျလုပျပေးပါအုံး မ” အဲဒီ အခြိနျမှာဘဲ မသေျော က ထလာပွီး နောကျကနေ သိုငျးဖကျ နို့တှနေဲ့ပှတျတော့တာဘဲ ပနျးအိကလဲ နှုတျခမျးကို လာစုပျ နဲ့ ကြှနျတျောမှာ အိမျမကျ မကျနသေလားတောငျ ထငျနရေတယျ ရှမှေ့ာ ရှိနတေဲ့ ပနျးအိ နို့တှကေို စမျးလိုကျတော့ မှ အိကနဲနအေောငျ ကိုငျလို့ကောငျးမှနျးသိတော့မှ ဒါတကယျပါလားဆိုပွီး အတှေးတှဖြေောကျပွီး လကျရှိ လုပျငနျးပွနျစလိုကျတယျ ပနျးအိ နဲ့ နှုတျခမျးခွငျးနနျးနရောမှ နို့တှကေို ငုံစုပျပေးလိုကျ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို ရှာလေးနဲ့ လိုကျယကျလိုကျတော့ ပနျးအိ ငွီးသံ ထှကျလာတယျ နောကျက မသေျောကလဲ အားမလိုအားမရ နဲ့။
သူ့ အဖုတျနဲ့ ကြှနျတျော တငျပါးတှကေို လိုကျပှတျနတေယျ အောကျက မငွိမျးကလဲ ဒဈတဝိုကျရှာလေး နဲ့ရကျလိုကျ လီးတဈခြောငျးလုံး ပါးစပျထဲ ထိုးထညျ့လိုကျနဲ့ အစှမျးကုနျ ပညာ ပွနတေော့ ကြှနျတေျာ့မှာ တဈခြီ ပွီးထားတာ တောငျ ပွီးခငျြခငျြ ဖွဈလာတယျအဲဒါနဲ့ ကုတငျပျေါသှားရအောငျဗြာ ဆိုပွီး ပွောလိုကျတော့ ပနျးအိ က အရငျလေးဖကျထောကျတကျသှားတယျ ပွီးတော့ မငွိမျးခေါငျးကို ဆှဲမ ပွီး ဖယျခိုငျးတာကို မဖယျခငျြဖယျခငျြနဲ့ လီးကို ပွနျထုတျပေးတယျ အဲဒီ အခြိနျမှာ တံခါး ပှငျ့သံ ကွားလို့ နောကျလှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ လားလား ကြျောကြျောရယျလေ ပုဆိုး ခြှတျပွီး လီးတထောငျထောငျ နဲ့ အခနျးထဲ ဝငျလာတယျ “အာ..အဲ…အို….ဟယျ” ကြှနျတျောတို့အခနျးထဲက လေးယောကျလုံး မငျသကျကုနျကွတယျ အဲဒီတော့မှ ကြှနျတျောသူငယျခငျြးက “ ခှေးမသား….ငါ့တောငျ မချေါဘူး ဒီမှာလာ ပွီး စားပှဲကငျြးပနတေယျပေါ့…” “ အာ..မဟုတျပါဘူးကှာ”။
ဘာမဟုတျရမှာလဲ ခုမိပွီလေ…. ကြှနျတျောလဲ ဘာပွောရမှနျးမသိတော့ဘဲ ရယျကြဲကြဲ လုပျနတေော့မှ မငွိမျးက သတိဝငျလာပွီး “မောငျလေး…မမတို့က မငျးနဲ့မကောငျးတတျလို့ပါ” အာ ဘာမှ မကောငျးတာမရှိဘူး ကောငျးတာလုပျတာဘဲ ကြှနျတျောလဲပါမယျဗြာ မငွိမျးတို့သူငယျခငျြးတှေ တဈယောကျမကျြနှာ တဈယောကျကွညျ့လိုကျ ကြျောကြေျာ့ ရဲ့ ထောငျနတေဲ့ ငပဲကို ကွညျ့လိုကျနဲ့။ ကဲ…ဒါဆိုလဲ ပိုကောငျးသှားတာပေါ့ စလိုကျကွစို့….ကြှနျတျောက မငွိမျးကိုပှပွေီ့း ကုတငျပျေါ ကိုယျတပိုငျးတငျပေးလိုကျတယျကနျြတဲ့ခါးအောကျပိုငျးက ကုတငျအောကျမှာထားပွီး အခှေ တှထေဲ ကွညျ့ပွီး လုပျခငျြနတေဲ့ အတိုငျး လှပတဲ့အဖုတျအကှဲကွောငျးလေး ထဲလြှာနဲ့သကျတငျလိုကျတယျမငွိမျးစီမှအားကနဲ အျောသံထှကျလာပွီးကြှနျတျော ခေါငျးကိုအတငျးဖိကိုငျပွီး ဆံပငျတှထေဲ ထိုးဖှတော့တယျ အား..ရှီး…..အား….ကောငျးလိုကျတာ မောငျလေးရာ စုပျစုပျ ကောငျးလိုကျတာ မောငျလေးရယျ လုပျတတျလိုကျတာ။
အား…..ရှီး….ကြှတျ..ကြှတျ….ရှီး…ကြျောကြျောကလဲ ဘေးမှာ ပကျလကျဝငျအိပျပွီး တောငျနတေဲ့ ငပဲကို မသေျောက စုပျ ပေးနတေယျ သူ့ခေါငျး ပျေါကို ပနျးအိ က တကျခှပွီး မွငျးစီးသလို ပှတျနတေော့တာ…. “အား…ရှီး…..အား….ကောငျးတယျ စုပျ စုပျ နငျတို့တှေ အတှအေ့ကွုံမရှိဘူးသာ ပွောတယျ လုပျတတျလိုကျတာ အား….အငျး…ရှီး….” ကြှနျတျောလဲ မငွိမျး အစိလေးကို စုပျလိုကျ ရှာလေးနဲ့အကှဲကွောငျးထဲ ထိုးမှလေိုကျ နဲ့ အပွာစာအုတျထဲက နညျးတှအေတိုငျး လုပျပေးနလေိုကျတယျ အနံ့အသကျလဲကောငျး တခါမှလဲမလုပျဘူးတော့ ယကျ ကောငျး ကောငျးနဲ့ အစှမျးကုနျယကျပေးလိုကျတာ “ကောငျးကောငျး မ မနနေိုငျတော့ဘူး လုပျတော့လေ” ဆိုပွီး မငွိမျးက ပွောတော့ အငျး ဆိုပွီး မကျတကျရပျ ပွီးတော့ မငွိမျး ခွနှေဈခြောငျးကို ကိုငျ လီးကို အဖုတျဝ မှာတပွေီ့း သှငျးတော့ မဝငျဘူး ဘေးထှကျသှားတယျ မငွိမျးလဲ ဘေးခြျောခြျောထိုးနတေော့ အားမရတော့ဘဲ။
မောငျလေး မှနျတငျခံ ပျေါမှာ အုံးဆီ ရှိတယျ အဲဒါ နဲ့ သုပျပွီး ထညျ့ပါလား ကြှနျတျောလဲအုနျးဆီသှား ယူတုနျး ကြျောကြျော စီကအသံထှကျလာတယျ “အား..ပွီးပွီ ပွီးပွီ စုပျစုပျ အား…” ကြျောကြျောလဲ မသေေျာ့ ပါးစပျထဲ သုတျတှပေနျးထညျ့လိုကျတယျ မသေျောကလဲ သုတျမကုနျမခငျြး စုပျငုံထားတယျ ကြျောကြေျာ့ မကျြနှာ ပျေါက ပနျးအိ ကလဲ အား..အား..အျောပွီး ကြျောကြေျာ့ မကျြနှာပျေါစောကျရညျတှေ ပနျးခြ လိုကျတာတှတေ့ော့ ကြှနျတျောလဲ မနနေိုငျတော့ဘဲ အပွေးတဈပိုငျးနဲ့ အုံးဆီဗူးယူ လိငျတံမှာ သုပျပွီး မငွိမျး အဖုတျထဲ အတငျး ထိုးထဲ့လိုကျတော့ တဈဝကျလောကျဝငျသှားတယျ မငွိမျးက အားကနဲအျောပွီး ဖွေးဖွေးလုပျပါ ကောငျးကောငျး ရယျ အမ ထှကျမပွေးပါဘူး ။ “ ဟုတျ..ဟီး.. အားပါသှားလို့ ပါ မ ရယျ ခု ဖွေးဖွေး လုပျမယျနျော” ဖွေးဖွေးလေး အသှငျးအထုတျ လုပျနရေငျး နဲနဲ ထကျထိုးလိုကျတော့ အလယျမှာ တဈခုခု ခံနသေလိုဘဲ ဒါဆို ငါကွားဘူးနတေဲ့ အပြိုမှေးဖွဈရမယျ။
နဲနဲ အသှငျးအထုတျ လုပျရတာ ခြောလာတော့ မှ အားနဲ့ စောငျ့ထညျ့လိုကျ တော့ ဖောကျ ဆိုတဲ့ အသံ ကွားလိုကျရပွီး အတှငျးကို လီးတဈခြောငျးလုံး ဝငျသှားတော့တယျ မငွိမျးကလဲ အား ဖွေးဖွေးလုပျပါဆိုမှ ဆိုပွီး မကျြစောငျးထိုးပွီး ကွာမူပိုပါ တော့တယျ ဘေးမှာလဲ ဘယျတုနျးထဲက ကွညျ့နတောလဲ မသိတဲ့ မသေျော ကလဲ အသံကို နားထောငျပွီး စိတျတှကွှေလာတယျနဲ့တူတယျ သူလဲ ကုတငျပျေါတကျပွီး ဖငျထောငျ ကာ မငွိမျးနဲ့ နှုတျခမျး စုပျနတေော့ ကြှနျတျောမကျြစိ ရှမှေ့ာ ပျေါနတေဲ့ မသေေျာ့ အဖုတျလေးကို ကုနျးစုပျလိုကျ တယျ မသေျောလဲ ကော့တကျသှားပွီး တအငျးအငျး နဲ့ ညီးရငျး ကြှနျတေျာ့ ရှာ ကို ခံယူနတေယျ အောကျကလဲ မငွိမျးအဖုတျထဲမှာ အသှငျးအထုတျ မှနျမှနျလုပျရငျး ရှာအစှမျးလဲ ပွနတေော့ နှဈယောကျစလုံး ကာမ အရသာ အပွညျ့အ၀ ခံစားနတေော့တယျ “အား…အီး.. ကောငျးကောငျး နာနာ စောငျ့ကှာ မ ကောငျးနပွေီ” မငွိမျးကပွောတော့ ကြှနျတျောလဲ အားကုနျ ကွုံးစောငျ့ပေးလိုကျတယျ။
အ..မသေျောလဲ ကောငျးနပွေီး မရပျနဲ့ ဆကျစုပျပေးအုံး “ ကြှနျတျောလဲ မငွိမျး အဖုတျထဲ အားကုနျစောငျ့နရေလို့ မသေျောကိုဆကျစုပျလို့မရတော့ဘူးဆနျ့ငငျဆနျ့ငငျ ဖွဈနတောတှတေ့ော့ ပနျးအိ က “လာ ဒီဘကျကို ငါ ဆကျစုပျပေးမယျ အငျး…အိ…အား…. ဖွေးဖွေးလုပျနျော ကြျောကြျော” ကြျောကြေျာ့ ကိုလဲပွော မသေျောကိုလဲ သူ့မကျြနှာပျေါ တကျခှ ခိုငျးလိုကျတယျ ကြျောကြျော က ပနျးအိ အဖုတျထဲ ကို ဘယျတုနျးထဲက သှငျး လိုကျမှနျးတောငျ မသိလိုကျဘူး မငွိမျး အဖုတျကို စောငျ့ကောငျးကောငျး နဲ့ လုပျနလေိုကျတာ ပနျးအိ ပွောမှ ကွညျ့လိုကျတော့ ကြျောကြျောကအသှငျးအထုတျ တောငျ မှနျမှနျ လုပျနပွေီ ကြျောကြေျာ့ လီးမှာလဲ သှေးစ နဲနဲ တှလေို့ကျတော့ ကြှနျတျောလဲ ပွုံးမိ လိုကျတယျ အဲဒါ ကို မငွိမျးက တှတေ့ော့ “ကဲ.. ကိုယျတျော ဒီမှာ ဆနျ့ငငျဆနျ့ငငျနဲ့ လုပျပါ ဆိုမှဘဲ သူမြားသှားကွညျ့နတေယျ “ ဆိုမှ ကြှနျတျောလဲ မငွိမျး ကိုသတိရပွီး အားကုနျစောငျ့တော့တယျ။
အား….အငျ့…အီး…ရှီး…. ကောငျးကောငျး လုပျ စောငျ့စောငျ့…အငျး…အီး…ရှီး…အား…ပွီးပွီ ကောငျးကောငျးရေ စောငျ့စောငျ့ အမ ပွီးပွီး အား….အမေ့ အား…..ရှီး…ကြှနျတျောလဲ မငွိမျး အသံကွားတော့ အားတကျလာပွီး အစှမျးကုနျစောငျ့လိုကျတာ သုတျတှပေါ မထိမျးနိုငျဘဲ မငွိမျး အဖုတျထဲ ပနျးထညျ့လိုကျပွီး မငွိမျးကိုယျပျေါ ခွပေဈလကျပဈ လှဲလိုကျ တော့တယျ။ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျလဲ အသကျ ပွငျးပွငျးရှူရငျး ခဏ နားနတေော့ ဘေးက ကြျောကြျောက ပနျးအိ ကိုလုပျနရောမှ ပနျးအိ အဖုတျ ထဲက လီးစှဲထုတျသံ ကွားလိုကျတော့ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတာ လီးကို မသေေျာ့ ပါးစပျထဲ ထညျ့လိုကျတာ တှတေ့ော့ အာ ဒီကောငျ တျောတျော တတျနပေါလား မသေျောကလဲ ဝငျလာတဲ့ လီးကို အားရပါးရ စုပျတော့တာဘဲ ပနျးအိ က လဲ မသေေျာ့ အဖုတျကို စုပျလိုကျ ယကျလိုကျနဲ့ ရှာအစှမျးပွပွီး ပညာကုနျသုံးနတေော့ မသေျောလဲ မနနေိုငျတော့ဘဲ ပနျးအိ လြှာနဲ့ သူ့အဖုတျကို အားကုနျ စောငျ့ကာ။
စောကျရညျတှေ ပနျးအိ မကျြနှာ ပျေါပနျးခြ လိုကျတယျ ကြျောကြျောလဲ လီးကို မသေေျာ့ ပါးစပျ ထဲက စှဲထုတျပွီး ပနျးအိ အဖုတျထဲကို ပွောငျးထညျ့ အားကုနျကွုံးစောငျ့နတေယျ “အီး…အငျ့… အငျ့…အီး….ကြျောကြျော မ လဲကောငျးလာပွီး မွနျမွနျ စောငျ့ တော့နျော..အီး…ရှီး…” ပနျးအိ က ပွောလိုကျရော မသေျောလဲ ပနျးအိ မကျြနှာ ပျေါမှာ ဆငျးပွီး ပနျးအိ မကျြနှာ ပျေါက ပပှေနတေဲ့ သူ့ စောကျရညျ တှေ ကို လိုကျယကျပါတော့တယျ အဲဒါလဲတှရေ့ော တဈခြီ ပွီးထားတဲ့ ကြှနျတေျာ့ ညီလေးလဲ ပွနျထောငျထ လာပါလရေော မငွိမျးကွညျ့ လိုကျတော့ သူက ပွုံးပွီး “တျောတျောကဲ ဟငျ့ ဒီကတော့ မရသေးဘူးနျော ရသှေားဆေးလိုကျအုံးမယျ” “အငျး….ဒါဆိုရငျတော့ မသေျော ရော” “ဒို့ကတော့ ရယျဒီဘဲ ကောငျးကောငျး” “အဲဒါမြိုးမှ ကွိုကျတာ ကဲ မသေျော စလိုကျရအောငျ” ပွောပွီး လေးဖကျထောကျလြှကျဖွဈနတေဲ့ မသေေျာ့ဖငျ ကို ကြှနျတျောဘကျကို စှဲယူပွီး အဖုတျဝ ကိုတလေို့ကျ တယျ။
ပွီးတော့ အရညျရှဲနတေဲ့ မသေေျာ့အဖုတျထဲကို ထညျ့လိုကျတော့ ဖွေးဖွေးခငျြးတဈရဈခငျြး ဝငျသှားတယျ အထဲမှာ အပြိုမှေးပါး မရှိတော့ဘူး ဒါဆို ဘယျသူ့လကျခကျြလဲမသိဘူး စဉျးစားနတေုနျး မသေျောက လုပျမှာ လုပျတာမဟုတျဘူး ဘာတှစေဉျးစားနတောလဲ“အဲ..ဘာမှမဟုတျပါဘူး” “ဒါဆိုရငျလဲမွနျမွနျ စောငျ့ပေးတော့” ကြှနျတျောလဲ သူစိတျတိုငျးကြ အားကုနျစောငျ့ပေးလိုကျတယျ အဲဒီအခြိနျမှာ ပနျးအိ ကို ကြျောကြျော အားကုနျစောငျ့နရေငျး “အီး…အား…ရှီး….အငျ့..အငျ့”အီး..ထှကျပွီ ကြျောကြျောရေ…အီး…အမေ့..အား…ရှီး..ကြှတျ..ကြှတျ” ပနျးအိ မှာ ဖငျကို အစှမျးကုနျပငျ့ကာ ကြျောကြေျာ့ စောငျ့ခကျြမြားကို ခံယူရငျ ဆနျ့ငငျဆနျ့ငငျ ဖွဈကာ ကာမ အထှကျအထိတျသို့ တကျလှမျးသှားပမေဲ့ ကြျောကြောကျကတော့ မပွီးသေးဘူး ပနျးအိ အဖုတျထဲမှာ လီးကို ထိုးစိမျထားရငျ ကြှနျတျော ကို မကျြစ ပွဈပွ တယျ ဘယျလိုလဲပေါ့ ကြှနျတျောကလဲ မသေေျာ့ကို မေးငေါ့ပွ တော့။
မသေျောက ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျကို ကွညျ့ကာ “လာလေ ကြျောကြျော” ဆိုပွီး ကြျောကြေျာ့ လီးကို ဖမျးစှဲပွီး ပါးစပျထဲစုပျငုံလိုကျတယျ ကြှနျတျောလဲ အံအားသငျ့ နတေော့ ဆကျမစောငျ့ဘဲ မငျသကျနမေိတယျ အဲဒါကိုမသေျောက အားမလိုအားမရဖွဈပွီး “ကဲ ကောငျးကောငျး လုပျလေ ဘာလို့ရပျနတောလဲလို့” “ဘာမှမဟုတျပါဘူး အံ့သွ နတော” “ဘာမှ အံ့သွ မနနေဲ့ နငျတို့နှဈယောကျ ညှပျခြ ခငျြတဲ့ ဆန်ဒ ရှိရငျ ငါက အသငျ့ဘဲ” ဒီတခါတော့ ကြှနျတျောတငျ မဟုတျဘူး ကြျောကြျော ပါ ပါးစပျအဟောငျးသားနဲ့ ကြှနျတေျာ့ကို ကွညျ့ရငျး မငျသကျနတေယျ ပွီးမှ နှဈယောကျလုံးသတိဝငျလာပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မကျြစ ပွဈကာ လုပျငနျး စကွဖို့ ပွငျဆငျတော့တယျ အဲဒီအခြိနျမှာ မငွိမျးက ရခြေိုးခနျးထဲမှ ပွနျရောကျလာပွီး “ကောငျမ ကဲနတေယျပေါ့ နငျ့ စမျးခငျြနတေဲ့ ပုံစံကို ခုစမျးတော့မလို့လား” “အငျး…ဒါမြိုးအခှငျ့အရေးက နှဈခါပွနျမရဘူးလေ မငွိမျးရယျ” ။
အေးပါ နငျပဲစမျး မနနေဲ့နျော ငါလဲ နငျပွောပွောနကေထဲက စိတျကူးထဲမှာအဲလို မြိုးစမျးကွညျ့ခငျြနတော နငျကောငျးရငျ ငါ့လဲပွောပွအုံးနျော “အေးပါ ခုဘဲသိရမယျ ခဏ စောငျ့” ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျကို ဘေးမှာထားပွီး သူတို့က နညျးပေါငျးစုံစမျးသပျဖို့လုပျနကွေတာ ကြှနျတျောတို့လဲ အားကမြခံ ငါတို့အစှမျးပွရတာပေါ့ဆိုပွီး နှဈယောကျစလုံးရဲ့စိတျထဲမှာ ကွိမျးဝါးပွီး အောကျက ညီတျောမောငျ ကိုအလုပျဆကျလုပျစလေိုကျတယျ စောငျ့တာ ရပျပွီး ကြှနျတျောက ပကျလကျလှနျပွီး ညီတျောမောငျကို ထောငျ ထားပေးလိုကျတယျ မသေျော က အပျေါကနေ သူ့ ပိပိ နဲ့တကျထိုငျလိုကျတယျ ကြျောကြျောက မသေေျာ့နောကျ မှာနရောဝငျယူပွီး ဘေးနားက အုနျးဆီ ပုလငျးထဲက အုနျးဆီ ယူပွီး သူ့ ငပဲကို သုတျလိမျးလိုကျတယျ မသေေျာ့ဖငျထဲကိုလဲ သုတျလိမျးလိုကျပွီးတော့ မသေေျာ့ ဖငျထဲကို ဖွေးဖွေးခငျြးထိုးထဲ့လိုကျတယျ မသေေျာ့မှာ မကျြလုံမှေးဆငျးပွီး အဖုတျထဲကနေ ကြှနျတေျာ့ ညီတျောမောငျကို အတငျးညှဈထားတယျလေ။
ကြှနျတျောလဲ ဖီးလျတကျပွီး ပွီးခငျြခငျြတောငျဖွဈသှားတာ မနဲထိမျးထားလိုကျရတယျ ကြျောကြျောကတော့ သူ့ညီတျောမောငျကို တဆုံးထိုးထဲ့ပွီး ဖွေးဖွေးခငျြး စစောငျ့ နတေော့တယျ ကြှနျတျောလဲ အားကမြခံ ညီတျောမောငျကို ပငျ့ထိုးပေးလိုကျတော့ မသေျောမှာ ညီးသံ တှထှေကျလာတယျ “အငျး…အီး..ရှီး..…အီး…ကြှတျ..ကြှတျ” “အား..ကောငျးတယျ….အငျ့..ဟငျး…စောငျ့..စောငျ့တော့” ကြျောကြျောလဲ နောကျကနအေားကုနျစောငျ့ ကြှနျတျောလဲ ပငျ့ထိုးနဲ့ မီးကုနျရနျးကုနျ ကွမျးပါတော့တယျ။ မငွိမျးနဲ့ ပနျးအိ လဲ ခွောကျကိုး ပုံစံနဲ့ တဈယောကျအဖုတျတဈယောကျ အပွနျအလှနျ ယကျနကွေတယျ ကြှနျတျောတို့လဲ စောငျ့နရေငျးက ကငျြတကျလာပွီး သုတျမထိမျးနိုငျတော့ဘဲ ကိုစီ အသုံးတျောခံနတေဲ့ အပေါကျထဲကို သုတျတှေ တလဟော ပနျးထညျ့လိုကျကာ ကာမအထှတျအထိတျသို့ တကျလှနျးရောကျရှိသှားတော့တယျ….။
မသေျောလဲ အိပျယာခငျးကို ကြှဈကြှဈပါအောငျစုတျပွီး စောကျရညျတှပေနျးထှကျလာတာကို ညီတျောမောငျမှ တဆငျ့ခံစားမိ လိုကျတယျ မငွိမျးနဲ့ပနျးအိ လဲ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အပွနျအလှနျ အဖုတျယကျနရောမှ နှဈယောကျလုံး ပွိုငျတူပွီးခငျြး သို့ရောကျသှားတော့ ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့လဲ ခွကေုနျလကျပနျးကကြာ အိပျမောကွသှားလေ၏။ တဈရေးနိုးတော့ ကြှနျတေျာ့ ညီတျောမောငျမှာ တငျးကနဲနအေောငျခံစားမိတော့ မကျြလုံး မဖှငျ့ခငျြဖှငျ့ခငျြနဲ့ ဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတာ ပနျးအိ ကြှနျတော့ ညီတျောမောငျကို သူ့အဖုတျထဲထညျ့ပွီးအပျေါကနေ စိတျရှိလကျရှိ စောငျ့နလေရေဲ့ ဘေးဘကျကွညျ့လိုကျတော့ မငွိမျး နဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျမိသှားတယျ ပွီးတော့ မငွိမျးက ကြှနျတေျာ့ နှုတျခမျးကို စှဲယူစုပျနနျးတာခံလိုကျရတယျ မငွိမျးကိုယျက အငွိမျမနဘေဲ လှုပျနတောတှတေ့ော့ ကြျောကြျောက မငွိမျးကို လိုးနမှေနျးသိလိုကျတယျ မသေျောကလဲ ရခြေိုးခနျးထဲက ထှကျလာတော့။
သူတို့တှေ ဘယျတုနျးထဲက လုပျနတောမလဲမသိဘူး ငါ့တောငျမနိုးဘူးလို့ တှေးနတေုနျး မသေျော က မကျြနှာပျေါခှတကျ လာတယျပွီးတော့ သူ့အဖုတျနဲ့ ကြှနျတေျာ့မကျြနှာကို ပှတျတော့တာဘဲ ကြှနျတျောလဲ လြှာကိုထုတျပွီး အစိလေး ကိုသိမျးယကျလိုကျတယျ မသေျောကလဲ အားကမြခံ စအိုနဲ့ပါ ကြှနျတေျာ့ရှာကို လိုကျပှတျနတေယျ အီး…ရှီး….အငျ့…ပနျးအိက ကြှနျတေျာ့ကို ကွောပေးပွီး အားကုနျစောငျ့နရေငျးက “မသေျော ငါ့ဖငျလဲ ယကျပေးအုံး..အီး..ရှီး..” ပနျးအိလဲစောငျ့နရေငျးက မသေေျာ့ကိုလှနျးပွောလိုကျတယျ မသေျောလဲ ပနျးအိ ဖငျကားကားကွီးကို ဖွဲကာ စအို ကိုလြှာနဲ့သိမျးယကျပေးလိုကျ ကြှနျတျော မကျြနှာကို သူ့ဖငျနဲ့ပှတျလိုကျနဲ့ ကာမ အရသာကို အပွညျ့အ၀ ခံစားနေ ကွတော့တယျ ဘေးက ကြျောကြျောနဲ့မငွိမျးလဲ အားကုနျစောငျ့ရငျး ဆနျ့ငငျဆနျ့ငငျနဲ့ ညိမျသကျသှားကွတယျ ပနျးအိ လဲ စောငျ့နရေငျးကနေ ရပျလိုကျပွီး အုနျးဆီ ပုလငျးယူကာ ကြှနျတေျာ့ လိငျတံ ကိုသုတျလိမျးလိုကျတယျ။
ပွီးတော့ သူ့စအိုဝမှာတကေ့ာ ဖွေးဖွေးခငျြး ထိုငျခလြိုကျတော့တယျ ကြှနျတျောလဲ ပါးစပျကမအားဘဲ မသေျော အဖုတျရော စအိုရော ယကျပေးနရေတော့ ပနျးအိ စအိုထဲ လီးအဝငျအထှကျကို မတှရေ့ဘဲဖွဈနတေော့ စိတျထဲ တမြိုးခံစားလာရတယျ အားမလိုအားမရလဲဖွဈလာတယျ။ ပနျးအိ လဲ ကြှနျတေျာ့ဖကျ မကျြနှာမူလြှကျပွနျဖွဈနေ တော့ မသေျောက ပနျးအိ အဖုတျကို ရှာနဲ့ယကျပေးနတော သတိထားမိလိုကျတယျ လီးတခြောငျးလုံးလဲ ကငျြ တကျလာပွီး ပွီးခငျြခငျြဖွဈလာတော့ စိတျကိုထိမျးကာ မသေေျာ့ အဖုတျကို ရှာနဲ့ အစှမျးကုနျယကျပေးနလေိုကျ တယျ “ဖှကျ..ဖှကျ…အငျ့…အငျ့…အီး…ဖောငျး..ဖောငျး” ပနျးအိ အားကုနျစောငျ့နပွေီ ကြှနျတျောလဲ သုတျကိုမနဲထိမျးကာ မသေေျာ့ အဖုတျထဲ ရှာနဲ့လိုးပေးနမေိတယျ ကြှနျတျောလဲ ဘယျလိုမှ မထိမျးထားနိုငျတော့ဘဲ ပနျးအိ စအိုထဲသို့ သုတျ တှကေို အစှမျးကုနျပနျးထညျ့လိုကျ တော့တယျ မသေျော လဲ ကြှနျတေျာ့မကျြနှာကို အတငျးဖိပှတျနတေော့။
သူပွီးတော့မယျဆိုတာ စိတျကသိလိုကျ တယျ အဲဒါနဲ့ လြှာကိုအစှမျးကိုထုတျပွီး အစိလေးကိုပါ သိမျးယကျနတေုနျး ပနျးအိ က ကြှနျတေျာ့ပျေါကနေ ဆငျးပွီးကြှနျတေျာ့ဘေးနားမှာ လာအိပျခလြိုကျတယျ ပွီးတော့ မငွိမျးက သူ့မကျြနှာပျေါတကျခှပွီး အဖုတျနဲ့ ပှတျနတေုနျး ကြျောကြျောက မငွိမျးစအိုထဲ နောကျကနသှေငျးနတောတှလေို့ကျတယျ မသေျော လဲ အဖုတျက ပှစိပှစိလုပျရငျး ကြှနျတေျာ့မကျြနှာပျေါ စောကျရညျတှေ ပနျးခြ လိုကျတယျ ပနျးအိကလဲ မငွိမျးအဖုတျကို ယကျလိုကျအစိကို လကျနဲ့ပှတျလိုကျလုပျပေးနတေယျ ကြျောကြျောလဲ မငွိမျးစအိုထဲ စိတျကွိုကျအားကုနျစောငျ့ နတောတှတေ့ော့ ကြှနျတေျာ့ငပဲလဲပွနျထောငျထလာတယျ ကြှနျတျောလဲ ကိုယျ့ကို ကိုတောငျအံ့သွသှားတယျ အရငျဂှလှေိမျ့တာတောငျ အဲဒီလောကျဆို မထောငျနိုငျတော့ဘူး ခုတော့ အစှမျးကုနျပွနျထောငျလာပွနျပါလေ ရော မငွိမျးလဲ ကြှနျတေျာ့ငပဲကိုကွညျ့ပွီး ကြျောကြေျာ့ကို။
ခဏပွနျထုတျပေးအုံး ဒီမှာ ကောငျးကောငျး ဟာ ပွနျထောငျလာပွီ အမ နရောပွောငျးလိုကျအုံးမယျ ကြျောကြျောလဲ ဘာဆိုတာ သဘောပေါကျသှားကာ မငွိမျးစအိုထဲက သူ့ငပဲကိုစှဲထုတျပေးလိုကျတယျ မငွိမျးလဲ ကြှနျတေျာ့ပျေါတကျခှပွီး မကျြလုံးလေးမှေးဆငျးကာ သူ့ပိပိမှာကြှနျတေျာ့ ငပဲကိုတပွေီ့းထိုငျခြ ပွီး ဖိစောငျ့နေ တုနျး ကြျောကြျောကို လှမျးကွညျ့ကာ “မ ကိုညှပျခလြေ ကြျောကြျော မ နောကျထဲထညျ့လိုကျ…”ကြျောကြျောလဲ အခြိနျစိုငျးမနဘေဲ မငွိမျးနောကျနရောယူပွီး မငွိမျးစအိုဝ ကို သူ့ငပဲတပွေီ့းဆကျတိုကျစောငျ့ တော့တယျ ဒီတိုငျးလုပျနရေငျး မငွိမျးကညောငျးလာပွီဆိုတာတာနဲ့ ကြျောကြျောက မငွိမျးစအိုထဲက သူ့ငပဲကို စှဲထုတျပေးလိုကျတော့ မငွိမျးကလဲ သူ့အဖုတျထဲက ကြှနျတေျာ့ငပဲကို စှဲထုတျကာ မကျတကျရပျပွီး ကြှနျတေျာ့ ကိုကွောပေးကာ လှညျ့လိုကျတော့ ကြှနျတျောလဲ ဘာလုပျမလဲကွညျ့နတေုနျး သူ့စအိုဝမှာ ကြှနျတော့ ငပဲကို တပွေီ့းထိုငျခလြိုကျတယျ။
အဲဒီတော့မှ ကြှနျတျောရောကြျောကြျောရောသဘောပေါကျပွီး ကြျောကြျောကမငွိမျး အဖုတျထဲသူ့ငပဲထိုးထဲ့ကာအားကုနျစောငျ့တော့တယျ မငွိမျးလဲ အသံစုံထှကျလာပွီး “မွနျမွနျစောငျ့ပေးတော့ အမ ပွီးတော့မယျ မွနျမွနျစောငျ့…အား…ရှီး…စောငျ့…စောငျ့ ခပျကွမျးကွမျးစောငျ့ အမ ကိုအားမနာနဲ့စောငျ့တော့ အား..အီး…အငျ့…အီး…အမရေေ…အား..အား..ထှကျပွီ…အား….အမရေေ…အား…. “အီး..ရှီး…ကောငျးလိုကျတာ…ဒီတဈခါ အကောငျးဆုံးဘဲ ဟငျး….” မငွိမျးလဲညိမျကွသှားတော့ ကြှနျတျောတို့သူငယျခငျြးနှဈယောကျလဲ ဒီတိုငျးညိမျနပေေးထားလိုကျရတယျ ကြှနျတျောတို့တော့ မပွီးသေးတော့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မကျြစပဈပွီး ဘာဆကျလုပျမလဲပေါ့ အဲဒီတော့ ဘေးနားက ပနျးအိ က “မငွိမျး နငျပွီးရငျ ဆငျးတော့လေ ငါလဲစမျးကွညျ့ခငျြတယျ နငျခံရတာတျောတျောကောငျးလား” “မသေျောပွောပွတုနျးက သိပျမထူးဘူးထငျတာ လကျတှခေံ့စားကွညျ့တော့မှ ဆှမြေိုးမအေ့ောငျကို ကောငျးတာ။
ဝတောငျ မဝခငျြဘူး ထပျခံခငျြသေးတယျ အဲဒီပုံစံမြိုးနဲ့ “ခုတော့ ငါ့အလှဲ့ပေးပါအုံး ငါလဲစမျးခငျြသေးတယျ နငျဆငျးတော့လေ” မငွိမျးလဲ မဆငျးခငျြဆငျးခငျြနဲ့အငျတငျတငျလုပျနတေုနျး ကြျောကြျောက မငွိမျးအဖုတျထဲက ငပဲကို စှဲထုတျ လိုကျတော့ မငွိမျးက “ဟာ..ဒီမှာ ဇိမျခံနတောကို နငျက ဇှတျစှဲထုတျတာဘဲ ခဏလေးထညျ့ထားတော့ ဘာဖွဈမှာ မို့လို့လဲ” မငွိမျးလဲ အားမလိုအားမရလသေံနဲ့ ကြျောကြေျာ့ကို အပွဈတငျတော့ ပနျးအိက “မငွိမျးတျောပွီလဟော ငါ့အလှညျ့ပေးအုံး ငါလဲခံခငျြသေးတယျ ကြျောကြေျာ့ကို အပွဈတငျမနနေဲ့ လာ ကြျောကြျော ပနျးအိထဲ ပွောငျးထညျ့” ကြျောကြျော က ခဏ “ခဏ ငါတို့ မကျတပျ လုပျကွညျ့ကွရအောငျ ဟကေ့ောငျ ကောငျးကောငျး သဘောတူလား” “အေး ကောငျးတယျ ငါလဲစမျးကွညျ့ခငျြတယျ ဒါပမေဲ့” “ဘာ ဒါပမေဲ့လဲ….” “ငါတော့ ပွိုငျးနသေလိုဘဲ နောကျနမှေ့ စမျးပါလားကှာ ခုတော့ မငွိမျးကို လုပျသလိုဘဲ လုပျကွတာပေါ့”။
ပနျးအိကလဲ “ငါလဲ မကျတပျ မနတေတျဘူးနျော ရိုးရိုးလဲ စလုပျပါလား နောကျမှ လုပျလဲရသားနဲ့” ကြျောကြျောလဲ အငျတငျတငျနဲ့ ကုတငျပျေါ လှတျတဲ့နရောမှာ ပကျလကျလှနျပွီး ငပဲကိုထောငျပေးထားလိုကျ တယျ။ မငွိမျးလဲ ကြျောကြျောပျေါခှပွီး သူ့အဖုတျနဲ့ ကြျောကြေျာ့ငပဲပျေါတထေို့ငျခလြိုကျပွီး ဖိစောငျ့ ရငျး ကြှနျတေျာ့ကို လှမျးကွညျ့လိုကျတော့ ကြှနျတျောလဲ ပနျးအိ ဘာလိုတယျဆိုတာ သိနတေော့ ပနျးအိ နောကျ မှာနရောယူပွီး သူ့စအိုထဲ ငပဲကို ခြော့သှငျးသှငျးလိုကျတော့ ပနျးအိစီက အသံထှကျလာတယျ “အီး…တျောတျောကွပျတယျ..ဖွေးဖွေးသှငျးနျော ဖွေး..ဖွေး..” ကြှနျတျောလဲ အရှိနျရလာတော့ ပနျးအိလဲကောငျးလာလို့နဲ့တူတယျ သူကပါပွနျစောငျ့လာတယျ ကြှနျတျောလဲ ကြျောကြေျာ့လှမျးကွညျ့လိုကျတာ့ ခေါငျးငွိမျ့ပွတာနဲ့ အရှိနျတငျပွီး အားကုနျကွုံးစောငျ့တော့တယျ။
ကြျောကြျော လဲ ကော့ထိုးထိုးရငျး ပွနျစောငျ့နတေော့ ပနျးအိလဲ ဖိခလြိုကျပွနျကော့တငျလိုကျနဲ့ ဝငျလာသမြှကို စညျးခကျြ ကွကွတုနျ့ပွနျတတျလာတယျ “အငျ့…အီး..အငျ့…ဟငျး…အား…အငျ့…အီး…စောငျ့..စောငျ့… ပနျးအိ ပွီးတော့မယျ စောငျ့….အီး…ရှီး….”ကြှနျတျောလဲ အားကုနျကွုံးစောငျ့ရငျး လိငျတံတဈလြှောကျကငျြတကျလာကာ မထိမျးနိုငျတော့ဘဲ ပနျးအိ စအို ထဲကို သုတျရညျတှပေနျးထညျ့ရငျး ပွီးဆုံးခွငျးကို ရောကျသှားတော့တယျ ကြှနျတျောလဲ လိငျတံကို ပနျးအိ စအို ထဲကထုတျကာ မငွိမျးဘေးနားဝငျလှဲရငျးအမောဖွနေတေုနျး “အီး…ပနျးအိ စောငျ့…စောငျ့ ကြှနျတျောလဲ ပွီးတော့မယျ စောငျ့..စောငျ့…အီး..” “အငျ့..ရှီး…ကြျောကြျောရေ…အား…အမေ…အား…အား…..” အသံစုံထှကျကာ နှဈယောကျသားညိမျကသြှားတော့မှ ကြှနျတျောလဲ မကျြခှံတှလေေးလာပွီး မှေးကနဲ့အိပျပြျောခွငျးသိုံရောကျရှိ သှားလတေော့သညျ….ပွီးပါပွီ။
ကျွန်တော် အိမ်မက်ထဲမှာ နတ်သမီးလေး တစ်ပါး ကျွန်တော်ငပဲကိုလာကိုင်ပြီး စုပ်ပေးနေတယ် ပြီးတော့ ညှစ်လိုက်သလိုခံစားမိတော့ အိမ်မက်ကလန့်နိုးလာတယ် အပြင်မှာလဲ တစ်ယောက်ယောက်လာကိုင်နေ သလိုခံစားမိတော့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ငါဘယ်ရောက်နေတာလဲ အော် မှတ်မိပြီ ငါသူငယ်ချင်း အိမ်မှာ စာလာကျက်တာဘဲ ဒါဆို “ဟာ…အမ” “မောင်လေး နိုးပြီလား ရှူးတိုးတိုး” သူပြောမှ ဘေးမှာ အိပ်နေတဲ့ကောင်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်း အိပ်နေတာသိုးနေတာဘဲ ပုဆိုးကလဲ ခေါင်းမှာ စွတ်လို့ “ လာလာ မောင်လေး မ အခန်းလိုက်ခဲ့” ကျွန်တော် တွေဝေသွားတယ် အောက်က ကောင်ကလဲ ထောင်လို့ စိတ်ကလဲပါနေပြီ ခေါ်နေတာလဲ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းရဲ့ အမ စိတ်ကို ဒွန်တွဲနေတဲ့အချိန် မမ ရဲ့လက်ကလဲ ဂွင်းတိုက်ပေးနေတော့ လူပျိုရိုင်းလေး ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘူး “ ဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲ မောင်လေး။
ဗျာ….ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး တစ်ခါမှ မလုပ်ဘူးလို့ ခုတောင် ထွက်ချင်နေလို့ ထွက်တော့မယ် အမ အား……မရတော့ဘူး ထွက်ပြီ ထွက်ပြီ အီး…..” သုတ်ထွက်လာတော့ မမ က ပါးစပ်နဲ့စုပ်၍ အဆက်မပျက်ကွင်းတိုက်ပေးရင်း ထွက်သမျှ သုတ်တွေကို အကုန် စုပ်ယူမြိုချလိုက်တယ် “ကောင်းလိုက်တာဗျာ တစ်ခါမှ အဲလိုမကောင်ဖူးဘူး “ “ ဒါဆို မောင်လေး အရင်က လုပ်ဖူးတယ်ပေါ့” “ အာ အဲလိုမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ပါသာ ဘဲလုပ်တာ အမ လုပ်ပေးသလိုမကောင်းဘူး…အဲဒါပြောတာပါ” “ ဒါဆို ဒီထက်ကောင်းအောင် အမ လုပ်ပေးမယ် အမ အခန်းလိုက်ခဲ့..လာ”ဘာပြောကောင်းမလဲ စိတ်ထဲကသာ စိုးရိန်နေတာ လူက ထ လိုက်နေပြီ ပြီးမှ သတိရတယ် “အာ…အမ အမရဲ့အခန်းထဲမှ အမသူငယ်ချင်းတွေနဲ့လေ” “ အဲဒါဘာဖြစ်လဲ မောင်လေးက မလိုက်ချင်ဘူးလား” “ အာ…ဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက သူတို့နဲ့ဖြစ်ပါ့မလားလို့” “ အော်မောင်လေးရယ် အမ သူငယ်ချင်းတွေလဲ အမလိုဘဲ စမ်းကြည့်ချင်နေတာ။
ဘာလဲ ငါ့မောင်က မကြိုက်လို့လား ….. အာ..မဟုတ်ပါဘူးဗျာ တခါမှ အတွေ့အကြုံမရှိတော့ ကျွန်တော်လဲ စမ်းချင်နေတာ လူများတော့ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့တော့ ကောင်းတယ်နော်” သူငယ်ချင်းကို ပြန်ကြည့်တော့ လောကကြီးထဲ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ မသိနိုင်အောင် အိပ်မောကျ နေလေရဲ့ ငါသူအမ အခန်းလိုက်သွားတာ ငါ့များ စိတ်ဆိုးနေမလားဘဲ အင်း.. ဒါပေမဲ့သူအမ အရင်း မဟုတ်ဘူးလဲ ကြားတယ်ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်လေ စားရကံ ကြုံလာတော့လဲ ရှလွတ်…… အော် ပြောရအုံးမယ် ကျွန်တော် နာမည်က ကောင်းထက် သူငယ်ချင်းက ကျော်ထက် တဲ့ အဲဒါကြောင့် တွဲမိနေလားမသိပါဘူး… ခင်တဲ့သူတွေကတော့ ကောင်းကောင်းနဲ့ ကျော်ကျော်လို့ခေါ်တယ် ကျော်ကျော့် အမကတော့ မငြိမ်းအိ မငြိမ်းလို့ဘဲ ခေါ်တယ် “ဟာ… ငါဒီနေ့အိမ်မက် မက်နေတာလား” “ခစ်ခစ်…ခစ်ခစ်….” ပါးစပ်က တောင် ယောင်ပြီးထွက်သွားတော့ မငြိမ်းက ဘေးကနေရယ်နေတယ် မယောင်ဘဲ နေနိုင်ရိုးလား။
အခန်းထဲမှာ တွေ့လိုက်ရတာက နတ်သမီးတွေလားမှတ်ရတယ် မငြိမ်းသူငယ်ချင်းတွေ ည၀တ် အင်းကျီ လေး တွေနဲ့ ဆက်ဆီ ကျနေတော့ လူရော စိတ်ရော ငယ်ပါ ရော ထ လာပါလေရော သူတို့လဲ ကျွန်တော် ကို မြင်ရော “ ခစ်ခစ်….ခစ်… မငြိမ်း နင် တယ်တော်ပါလား ဘယ်လို စည်းရုံးလာတာလဲ “ “ ကောင်မတွေ နင်တို့ဘဲ စမ်းချင်လှကြည်ရဲ့ဆိုလို့ ငါ အရှက်မရှိတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ပါအောင် ခေါ်လာတာနော် “ သူတို့ကအဲလိုပြောနေတော့ ကျွန်တော် မျက်နှာ ဘယ်နားထားရမှန်းမသိဘူး ရှက်လိုက်တာလဲ လွန်ရော သူတို့ ကလဲ ကျွန်တော်ကို စိုက်ကြည့်နေတယ် “ ကဲ မောင်လေး ရှက်မနေနဲ့တော့ အခန်းထဲ ၀င်လေ အမတို့ရှက်ဖို့လဲ ထားအုံး “ “ ဟုတ်” “ ဘာဟုတ်လဲ” “ အဲ..” “ ကဲပါ မငြိမ်းရယ် စ မနေပါနဲ့တော့ သူရှက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားရင် ငါတို့ အစီအစဉ်တွေ ပျက်သွားပါအုံးမယ်” လို့ပြောလိုက်တာကတော့ အ၀ါရောင် ဘောင်းဘီတိုအကြပ်လေး ၀တ်ပြီး။
တင်လုံး ကျစ်ကျစ်နဲ့ နို့ လုံးလုံးလေးနဲ့ ချောတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ တစ်ယောက် နောက်တစ်ယောက်ကတော့ တင်ကြီးကြီး ကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ ခါးသေးသေးလေးနဲ့ ယောကျာ်းတိုင်း လည်ပြန်ကြည့်ရတဲ့ ပုံနဲ့က ဇာပါးလေး ၀တ်ထားပြီး အတွင်းခံ အမဲရောင် ၀မ်းဆက် လေးတောင် မြင်နေရတယ် နောက်တစ်ယောက် မငြိမ်းကိုလဲ ကြည့်အုံးလေ။ မင်းကြီးကြိုက် ဘောဒီ လှလှနဲ့ ဆက်ဆီ ကျလှတဲ့ သူ ကျွန်တော်မှာ သူတို့ကို ကြည့်ပြီး အာခေါင်တွေတောင် ခြောက်လို့ စတွေးတောင် ခဏခဏ မျိုချ နေရတယ် “ကဲ ကိုယ်တော် စတွေးတွေဘဲ မျိုချ မနေနဲ့ အမ မိတ်ဆက်ပေးမယ်..လာ” ဆိုပြီး လက်ဆွဲခေါ် အခန်းထဲဝင် တံခါး ပိတ်ပြီး စတင်မိတ်ဆက်ပေးတယ် လုံးကျစ်ကျစ်လေးနာမည်က မေသော်ခိုင် တဲ့ တင်းကြီးကြီး က ပန်းအိဝင်း တဲ့ “ဟုတ်ကဲ့ ခုလို မိတ်လိုက်ရတဲ့ အဲ.. ခုလို သိခွင့်ရတဲ့ အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ..” “ခစ်ခစ်…ခစ်ခစ် ..ခစ်ခစ်” မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ ဘာသံမှ မထွက်တော့ဘဲ။
တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ဘယ်က ဘယ်လို စရမှန်းမသိတော့ဘဲ မင်သက် နေကြရာမှ နဲနဲ သွက်သွက်လက်လက် ရှိတဲ့ မေသော် က “ ကဲ..ဒီတိုင်းရပ်နေလို့တော့ အချိန်ကုန်တာဘဲ အဖက်တင်မယ် စလိုက်ကြစို့” စလိုက်ကြစို့ ဆိုပင်မဲ့ ကျွန်တော်မှ ဘယ်က ဘယ်လိုစရမလဲ စဉ်းစားနေရတယ် အိုဘာဖြစ်ဖြစ် ဆိုပြီး စမယ်လုပ်တုန်းရှိသေး ကုတင်ပေါ်က နှစ်ယောက်က တစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက် နန်းစုပ်နေကြပြီ ကိုလဲ အားကျမခံ မငြိမ်းဘက်လှည့်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို လှမ်းစွဲစုပ်လိုက်တော့တယ်… နှုတ်ခမ်းခြင်းစုပ်နန်းနေရာမှ လက်ကလဲ နို့တွေကို အပေါ်ကနေ စုတ်ချေပေးလိုက် ဖင်ကိုညှစ်လိုက်လုပ် တဲ့အချိန်မှာ မငြိမ်းလဲ တဟင်းဟင် ဖီးတက်လာပြီး “အင်းကျီတွေ ချွတ်လိုက်ရအောင် ကောင်းကောင်းရယ်…” “ဟုတ်..မငြိမ်း” အင်းကျီတွေ အကုန်ချွတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ အားလုံး ကိုယ်စီ အောက်ခံလေးတွေသာကျန်တော့ တယ် ကျွန်တော်လဲ ဟိုနှစ်ယောက်ကိုပါ ကြည့်လိုက်တော့။
လားလား သူတို့က အောက်ခံတောင် မရှိတော့ဘူး မေသော် နို့လေးတွေက လုံးလုံးလေး ရယ် အောက်က စောက်ဖုတ်အုံကလဲ အမွှေးရေးရေးလေးတွေ လှလိုက်တာ အရည်လေးတွေလဲ စို့လို့ ပန်းအိ ကိုကြည့်လိုက်တော့လဲ ပေါက်စီ နှစ်လုံး တပ်ထားသလား အောက်မေ့ရတယ် စောက်ဖုတ်ကတော့ မွှေးတော်တော်သန်နေပြီး တစ်မျိုးကြည့်လှနေတာဘဲ “ကဲ..ကိုယ်တော် ဒီတိုင်းရပ်ကြည့်နေမှာလား “ ဘေးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ လားလား သူလဲမခေပါလား ပေါင်တန်သွယ်သွယ် ကြားမှာ အဖုတ်မွှေး ပါးပါးလေး နဲ့ မငြိမ်းကို ကြည့်ပြီး မနေနိုင်တော့ဘဲ အောက်က ငပဲက လဲအစွမ်းကုန် မာတောင်နေပြီး အတွင်းခံထဲမှ ရုန်းထွက်နေချင်နေပြီလေ…ဒါကိုအလိုက်သိတဲ့ မငြိမ်းက ဘောင်းဘီ ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ “အို….အဲ…ခစ်….” ဆိုပြီး ဘေးက နှစ်ယောက်က အသံထွက်လာတယ် “ငါတို့တော့ လူရွေးမှန်ပြီ “ ဆိုပြီး မေသော် က ပြောလဲပြော အရည်လဲ့နေတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ စိုက်ကြည့်နေတယ်လေ။
ပန်းအိဆို ခုထိ ပါးစပ်တောင် မပိတ်နိုင်ဘဲ မင်သက်နေပြီး ကျွန်တော် ငပဲကို ဘဲ မျက်တောင် မခက် လိုက်ကြည့်နေတယ် အဲဒီအချိန်မှာဘဲ မငြိမ်းက ဒါငါ အရင် ဆိုတဲ့ ပုံနဲ့ ကျွန်တော် ငပဲကို ပါးစပ်နဲ့စုပ်ငုံလိုက်တော့ ကျွန်တော်မှာ “အား..” “ဘာလို့လဲ မောင်လေး နာလို့လား” “ ဟုတ်ဘူး ကောင်းလို့ ဆက်လုပ်ပေးပါအုံး မ” အဲဒီ အချိန်မှာဘဲ မေသော် က ထလာပြီး နောက်ကနေ သိုင်းဖက် နို့တွေနဲ့ပွတ်တော့တာဘဲ ပန်းအိကလဲ နှုတ်ခမ်းကို လာစုပ် နဲ့ ကျွန်တော်မှာ အိမ်မက် မက်နေသလားတောင် ထင်နေရတယ် ရှေ့မှာ ရှိနေတဲ့ ပန်းအိ နို့တွေကို စမ်းလိုက်တော့ မှ အိကနဲနေအောင် ကိုင်လို့ကောင်းမှန်းသိတော့မှ ဒါတကယ်ပါလားဆိုပြီး အတွေးတွေဖျောက်ပြီး လက်ရှိ လုပ်ငန်းပြန်စလိုက်တယ် ပန်းအိ နဲ့ နှုတ်ခမ်းခြင်းနန်းနေရာမှ နို့တွေကို ငုံစုပ်ပေးလိုက် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ရှာလေးနဲ့ လိုက်ယက်လိုက်တော့ ပန်းအိ ငြီးသံ ထွက်လာတယ် နောက်က မေသော်ကလဲ အားမလိုအားမရ နဲ့။
သူ့ အဖုတ်နဲ့ ကျွန်တော် တင်ပါးတွေကို လိုက်ပွတ်နေတယ် အောက်က မငြိမ်းကလဲ ဒစ်တ၀ိုက်ရှာလေး နဲ့ရက်လိုက် လီးတစ်ချောင်းလုံး ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်နဲ့ အစွမ်းကုန် ပညာ ပြနေတော့ ကျွန်တော့်မှာ တစ်ချီ ပြီးထားတာ တောင် ပြီးချင်ချင် ဖြစ်လာတယ်အဲဒါနဲ့ ကုတင်ပေါ်သွားရအောင်ဗျာ ဆိုပြီး ပြောလိုက်တော့ ပန်းအိ က အရင်လေးဖက်ထောက်တက်သွားတယ် ပြီးတော့ မငြိမ်းခေါင်းကို ဆွဲမ ပြီး ဖယ်ခိုင်းတာကို မဖယ်ချင်ဖယ်ချင်နဲ့ လီးကို ပြန်ထုတ်ပေးတယ် အဲဒီ အချိန်မှာ တံခါး ပွင့်သံ ကြားလို့ နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ လားလား ကျော်ကျော်ရယ်လေ ပုဆိုး ချွတ်ပြီး လီးတထောင်ထောင် နဲ့ အခန်းထဲ ၀င်လာတယ် “အာ..အဲ…အို….ဟယ်” ကျွန်တော်တို့အခန်းထဲက လေးယောက်လုံး မင်သက်ကုန်ကြတယ် အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းက “ ခွေးမသား….ငါ့တောင် မခေါ်ဘူး ဒီမှာလာ ပြီး စားပွဲကျင်းပနေတယ်ပေါ့…” “ အာ..မဟုတ်ပါဘူးကွာ”။
ဘာမဟုတ်ရမှာလဲ ခုမိပြီလေ…. ကျွန်တော်လဲ ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘဲ ရယ်ကျဲကျဲ လုပ်နေတော့မှ မငြိမ်းက သတိဝင်လာပြီး “မောင်လေး…မမတို့က မင်းနဲ့မကောင်းတတ်လို့ပါ” အာ ဘာမှ မကောင်းတာမရှိဘူး ကောင်းတာလုပ်တာဘဲ ကျွန်တော်လဲပါမယ်ဗျာ မငြိမ်းတို့သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်လိုက် ကျော်ကျော့် ရဲ့ ထောင်နေတဲ့ ငပဲကို ကြည့်လိုက်နဲ့။ ကဲ…ဒါဆိုလဲ ပိုကောင်းသွားတာပေါ့ စလိုက်ကြစို့….ကျွန်တော်က မငြိမ်းကိုပွေ့ပြီး ကုတင်ပေါ် ကိုယ်တပိုင်းတင်ပေးလိုက်တယ်ကျန်တဲ့ခါးအောက်ပိုင်းက ကုတင်အောက်မှာထားပြီး အခွေ တွေထဲ ကြည့်ပြီး လုပ်ချင်နေတဲ့ အတိုင်း လှပတဲ့အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေး ထဲလျှာနဲ့သက်တင်လိုက်တယ်မငြိမ်းစီမှအားကနဲ အော်သံထွက်လာပြီးကျွန်တော် ခေါင်းကိုအတင်းဖိကိုင်ပြီး ဆံပင်တွေထဲ ထိုးဖွတော့တယ် အား..ရှီး…..အား….ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရာ စုပ်စုပ် ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရယ် လုပ်တတ်လိုက်တာ။
အား…..ရှီး….ကျွတ်..ကျွတ်….ရှီး…ကျော်ကျော်ကလဲ ဘေးမှာ ပက်လက်ဝင်အိပ်ပြီး တောင်နေတဲ့ ငပဲကို မေသော်က စုပ် ပေးနေတယ် သူ့ခေါင်း ပေါ်ကို ပန်းအိ က တက်ခွပြီး မြင်းစီးသလို ပွတ်နေတော့တာ…. “အား…ရှီး…..အား….ကောင်းတယ် စုပ် စုပ် နင်တို့တွေ အတွေ့အကြုံမရှိဘူးသာ ပြောတယ် လုပ်တတ်လိုက်တာ အား….အင်း…ရှီး….” ကျွန်တော်လဲ မငြိမ်း အစိလေးကို စုပ်လိုက် ရှာလေးနဲ့အကွဲကြောင်းထဲ ထိုးမွှေလိုက် နဲ့ အပြာစာအုတ်ထဲက နည်းတွေအတိုင်း လုပ်ပေးနေလိုက်တယ် အနံ့အသက်လဲကောင်း တခါမှလဲမလုပ်ဘူးတော့ ယက် ကောင်း ကောင်းနဲ့ အစွမ်းကုန်ယက်ပေးလိုက်တာ “ကောင်းကောင်း မ မနေနိုင်တော့ဘူး လုပ်တော့လေ” ဆိုပြီး မငြိမ်းက ပြောတော့ အင်း ဆိုပြီး မက်တက်ရပ် ပြီးတော့ မငြိမ်း ခြေနှစ်ချောင်းကို ကိုင် လီးကို အဖုတ်ဝ မှာတေ့ပြီး သွင်းတော့ မ၀င်ဘူး ဘေးထွက်သွားတယ် မငြိမ်းလဲ ဘေးချော်ချော်ထိုးနေတော့ အားမရတော့ဘဲ။
မောင်လေး မှန်တင်ခံ ပေါ်မှာ အုံးဆီ ရှိတယ် အဲဒါ နဲ့ သုပ်ပြီး ထည့်ပါလား ကျွန်တော်လဲအုန်းဆီသွား ယူတုန်း ကျော်ကျော် စီကအသံထွက်လာတယ် “အား..ပြီးပြီ ပြီးပြီ စုပ်စုပ် အား…” ကျော်ကျော်လဲ မေသော့် ပါးစပ်ထဲ သုတ်တွေပန်းထည့်လိုက်တယ် မေသော်ကလဲ သုတ်မကုန်မချင်း စုပ်ငုံထားတယ် ကျော်ကျော့် မျက်နှာ ပေါ်က ပန်းအိ ကလဲ အား..အား..အော်ပြီး ကျော်ကျော့် မျက်နှာပေါ်စောက်ရည်တွေ ပန်းချ လိုက်တာတွေ့တော့ ကျွန်တော်လဲ မနေနိုင်တော့ဘဲ အပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ အုံးဆီဗူးယူ လိင်တံမှာ သုပ်ပြီး မငြိမ်း အဖုတ်ထဲ အတင်း ထိုးထဲ့လိုက်တော့ တစ်ဝက်လောက်ဝင်သွားတယ် မငြိမ်းက အားကနဲအော်ပြီး ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ ကောင်းကောင်း ရယ် အမ ထွက်မပြေးပါဘူး ။ “ ဟုတ်..ဟီး.. အားပါသွားလို့ ပါ မ ရယ် ခု ဖြေးဖြေး လုပ်မယ်နော်” ဖြေးဖြေးလေး အသွင်းအထုတ် လုပ်နေရင်း နဲနဲ ထက်ထိုးလိုက်တော့ အလယ်မှာ တစ်ခုခု ခံနေသလိုဘဲ ဒါဆို ငါကြားဘူးနေတဲ့ အပျိုမှေးဖြစ်ရမယ်။
နဲနဲ အသွင်းအထုတ် လုပ်ရတာ ချောလာတော့ မှ အားနဲ့ စောင့်ထည့်လိုက် တော့ ဖောက် ဆိုတဲ့ အသံ ကြားလိုက်ရပြီး အတွင်းကို လီးတစ်ချောင်းလုံး ၀င်သွားတော့တယ် မငြိမ်းကလဲ အား ဖြေးဖြေးလုပ်ပါဆိုမှ ဆိုပြီး မျက်စောင်းထိုးပြီး ကြာမူပိုပါ တော့တယ် ဘေးမှာလဲ ဘယ်တုန်းထဲက ကြည့်နေတာလဲ မသိတဲ့ မေသော် ကလဲ အသံကို နားထောင်ပြီး စိတ်တွေကြွလာတယ်နဲ့တူတယ် သူလဲ ကုတင်ပေါ်တက်ပြီး ဖင်ထောင် ကာ မငြိမ်းနဲ့ နှုတ်ခမ်း စုပ်နေတော့ ကျွန်တော်မျက်စိ ရှေ့မှာ ပေါ်နေတဲ့ မေသော့် အဖုတ်လေးကို ကုန်းစုပ်လိုက် တယ် မေသော်လဲ ကော့တက်သွားပြီး တအင်းအင်း နဲ့ ညီးရင်း ကျွန်တော့် ရှာ ကို ခံယူနေတယ် အောက်ကလဲ မငြိမ်းအဖုတ်ထဲမှာ အသွင်းအထုတ် မှန်မှန်လုပ်ရင်း ရှာအစွမ်းလဲ ပြနေတော့ နှစ်ယောက်စလုံး ကာမ အရသာ အပြည့်အ၀ ခံစားနေတော့တယ် “အား…အီး.. ကောင်းကောင်း နာနာ စောင့်ကွာ မ ကောင်းနေပြီ” မငြိမ်းကပြောတော့ ကျွန်တော်လဲ အားကုန် ကြုံးစောင့်ပေးလိုက်တယ်။
အ..မေသော်လဲ ကောင်းနေပြီး မရပ်နဲ့ ဆက်စုပ်ပေးအုံး “ ကျွန်တော်လဲ မငြိမ်း အဖုတ်ထဲ အားကုန်စောင့်နေရလို့ မေသော်ကိုဆက်စုပ်လို့မရတော့ဘူးဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြစ်နေတာတွေ့တော့ ပန်းအိ က “လာ ဒီဘက်ကို ငါ ဆက်စုပ်ပေးမယ် အင်း…အိ…အား…. ဖြေးဖြေးလုပ်နော် ကျော်ကျော်” ကျော်ကျော့် ကိုလဲပြော မေသော်ကိုလဲ သူ့မျက်နှာပေါ် တက်ခွ ခိုင်းလိုက်တယ် ကျော်ကျော် က ပန်းအိ အဖုတ်ထဲ ကို ဘယ်တုန်းထဲက သွင်း လိုက်မှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး မငြိမ်း အဖုတ်ကို စောင့်ကောင်းကောင်း နဲ့ လုပ်နေလိုက်တာ ပန်းအိ ပြောမှ ကြည့်လိုက်တော့ ကျော်ကျော်ကအသွင်းအထုတ် တောင် မှန်မှန် လုပ်နေပြီ ကျော်ကျော့် လီးမှာလဲ သွေးစ နဲနဲ တွေ့လိုက်တော့ ကျွန်တော်လဲ ပြုံးမိ လိုက်တယ် အဲဒါ ကို မငြိမ်းက တွေ့တော့ “ကဲ.. ကိုယ်တော် ဒီမှာ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ လုပ်ပါ ဆိုမှဘဲ သူများသွားကြည့်နေတယ် “ ဆိုမှ ကျွန်တော်လဲ မငြိမ်း ကိုသတိရပြီး အားကုန်စောင့်တော့တယ်။
အား….အင့်…အီး…ရှီး…. ကောင်းကောင်း လုပ် စောင့်စောင့်…အင်း…အီး…ရှီး…အား…ပြီးပြီ ကောင်းကောင်းရေ စောင့်စောင့် အမ ပြီးပြီး အား….အမေ့ အား…..ရှီး…ကျွန်တော်လဲ မငြိမ်း အသံကြားတော့ အားတက်လာပြီး အစွမ်းကုန်စောင့်လိုက်တာ သုတ်တွေပါ မထိမ်းနိုင်ဘဲ မငြိမ်း အဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်ပြီး မငြိမ်းကိုယ်ပေါ် ခြေပစ်လက်ပစ် လှဲလိုက် တော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လဲ အသက် ပြင်းပြင်းရှူရင်း ခဏ နားနေတော့ ဘေးက ကျော်ကျော်က ပန်းအိ ကိုလုပ်နေရာမှ ပန်းအိ အဖုတ် ထဲက လီးစွဲထုတ်သံ ကြားလိုက်တော့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ လီးကို မေသော့် ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်တာ တွေ့တော့ အာ ဒီကောင် တော်တော် တတ်နေပါလား မေသော်ကလဲ ၀င်လာတဲ့ လီးကို အားရပါးရ စုပ်တော့တာဘဲ ပန်းအိ က လဲ မေသော့် အဖုတ်ကို စုပ်လိုက် ယက်လိုက်နဲ့ ရှာအစွမ်းပြပြီး ပညာကုန်သုံးနေတော့ မေသော်လဲ မနေနိုင်တော့ဘဲ ပန်းအိ လျှာနဲ့ သူ့အဖုတ်ကို အားကုန် စောင့်ကာ။
စောက်ရည်တွေ ပန်းအိ မျက်နှာ ပေါ်ပန်းချ လိုက်တယ် ကျော်ကျော်လဲ လီးကို မေသော့် ပါးစပ် ထဲက စွဲထုတ်ပြီး ပန်းအိ အဖုတ်ထဲကို ပြောင်းထည့် အားကုန်ကြုံးစောင့်နေတယ် “အီး…အင့်… အင့်…အီး….ကျော်ကျော် မ လဲကောင်းလာပြီး မြန်မြန် စောင့် တော့နော်..အီး…ရှီး…” ပန်းအိ က ပြောလိုက်ရော မေသော်လဲ ပန်းအိ မျက်နှာ ပေါ်မှာ ဆင်းပြီး ပန်းအိ မျက်နှာ ပေါ်က ပေပွနေတဲ့ သူ့ စောက်ရည် တွေ ကို လိုက်ယက်ပါတော့တယ် အဲဒါလဲတွေ့ရော တစ်ချီ ပြီးထားတဲ့ ကျွန်တော့် ညီလေးလဲ ပြန်ထောင်ထ လာပါလေရော မငြိမ်းကြည့် လိုက်တော့ သူက ပြုံးပြီး “တော်တော်ကဲ ဟင့် ဒီကတော့ မရသေးဘူးနော် ရေသွားဆေးလိုက်အုံးမယ်” “အင်း….ဒါဆိုရင်တော့ မေသော် ရော” “ဒို့ကတော့ ရယ်ဒီဘဲ ကောင်းကောင်း” “အဲဒါမျိုးမှ ကြိုက်တာ ကဲ မေသော် စလိုက်ရအောင်” ပြောပြီး လေးဖက်ထောက်လျှက်ဖြစ်နေတဲ့ မေသော့်ဖင် ကို ကျွန်တော်ဘက်ကို စွဲယူပြီး အဖုတ်ဝ ကိုတေ့လိုက် တယ်။
ပြီးတော့ အရည်ရွှဲနေတဲ့ မေသော့်အဖုတ်ထဲကို ထည့်လိုက်တော့ ဖြေးဖြေးချင်းတစ်ရစ်ချင်း ၀င်သွားတယ် အထဲမှာ အပျိုမှေးပါး မရှိတော့ဘူး ဒါဆို ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲမသိဘူး စဉ်းစားနေတုန်း မေသော်က လုပ်မှာ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး ဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲ“အဲ..ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး” “ဒါဆိုရင်လဲမြန်မြန် စောင့်ပေးတော့” ကျွန်တော်လဲ သူစိတ်တိုင်းကျ အားကုန်စောင့်ပေးလိုက်တယ် အဲဒီအချိန်မှာ ပန်းအိ ကို ကျော်ကျော် အားကုန်စောင့်နေရင်း “အီး…အား…ရှီး….အင့်..အင့်”အီး..ထွက်ပြီ ကျော်ကျော်ရေ…အီး…အမေ့..အား…ရှီး..ကျွတ်..ကျွတ်” ပန်းအိ မှာ ဖင်ကို အစွမ်းကုန်ပင့်ကာ ကျော်ကျော့် စောင့်ချက်များကို ခံယူရင် ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြစ်ကာ ကာမ အထွက်အထိတ်သို့ တက်လှမ်းသွားပေမဲ့ ကျော်ကျောက်ကတော့ မပြီးသေးဘူး ပန်းအိ အဖုတ်ထဲမှာ လီးကို ထိုးစိမ်ထားရင် ကျွန်တော် ကို မျက်စ ပြစ်ပြ တယ် ဘယ်လိုလဲပေါ့ ကျွန်တော်ကလဲ မေသော့်ကို မေးငေါ့ပြ တော့။
မေသော်က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ကာ “လာလေ ကျော်ကျော်” ဆိုပြီး ကျော်ကျော့် လီးကို ဖမ်းစွဲပြီး ပါးစပ်ထဲစုပ်ငုံလိုက်တယ် ကျွန်တော်လဲ အံအားသင့် နေတော့ ဆက်မစောင့်ဘဲ မင်သက်နေမိတယ် အဲဒါကိုမေသော်က အားမလိုအားမရဖြစ်ပြီး “ကဲ ကောင်းကောင်း လုပ်လေ ဘာလို့ရပ်နေတာလဲလို့” “ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး အံ့သြ နေတာ” “ဘာမှ အံ့သြ မနေနဲ့ နင်တို့နှစ်ယောက် ညှပ်ချ ချင်တဲ့ ဆန္ဒ ရှိရင် ငါက အသင့်ဘဲ” ဒီတခါတော့ ကျွန်တော်တင် မဟုတ်ဘူး ကျော်ကျော် ပါ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ရင်း မင်သက်နေတယ် ပြီးမှ နှစ်ယောက်လုံးသတိဝင်လာပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မျက်စ ပြစ်ကာ လုပ်ငန်း စကြဖို့ ပြင်ဆင်တော့တယ် အဲဒီအချိန်မှာ မငြိမ်းက ရေချိုးခန်းထဲမှ ပြန်ရောက်လာပြီး “ကောင်မ ကဲနေတယ်ပေါ့ နင့် စမ်းချင်နေတဲ့ ပုံစံကို ခုစမ်းတော့မလို့လား” “အင်း…ဒါမျိုးအခွင့်အရေးက နှစ်ခါပြန်မရဘူးလေ မငြိမ်းရယ်” ။
အေးပါ နင်ပဲစမ်း မနေနဲ့နော် ငါလဲ နင်ပြောပြောနေကထဲက စိတ်ကူးထဲမှာအဲလို မျိုးစမ်းကြည့်ချင်နေတာ နင်ကောင်းရင် ငါ့လဲပြောပြအုံးနော် “အေးပါ ခုဘဲသိရမယ် ခဏ စောင့်” ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို ဘေးမှာထားပြီး သူတို့က နည်းပေါင်းစုံစမ်းသပ်ဖို့လုပ်နေကြတာ ကျွန်တော်တို့လဲ အားကျမခံ ငါတို့အစွမ်းပြရတာပေါ့ဆိုပြီး နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကြိမ်းဝါးပြီး အောက်က ညီတော်မောင် ကိုအလုပ်ဆက်လုပ်စေလိုက်တယ် စောင့်တာ ရပ်ပြီး ကျွန်တော်က ပက်လက်လှန်ပြီး ညီတော်မောင်ကို ထောင် ထားပေးလိုက်တယ် မေသော် က အပေါ်ကနေ သူ့ ပိပိ နဲ့တက်ထိုင်လိုက်တယ် ကျော်ကျော်က မေသော့်နောက် မှာနေရာဝင်ယူပြီး ဘေးနားက အုန်းဆီ ပုလင်းထဲက အုန်းဆီ ယူပြီး သူ့ ငပဲကို သုတ်လိမ်းလိုက်တယ် မေသော့်ဖင်ထဲကိုလဲ သုတ်လိမ်းလိုက်ပြီးတော့ မေသော့် ဖင်ထဲကို ဖြေးဖြေးချင်းထိုးထဲ့လိုက်တယ် မေသော့်မှာ မျက်လုံမှေးဆင်းပြီး အဖုတ်ထဲကနေ ကျွန်တော့် ညီတော်မောင်ကို အတင်းညှစ်ထားတယ်လေ။
ကျွန်တော်လဲ ဖီးလ်တက်ပြီး ပြီးချင်ချင်တောင်ဖြစ်သွားတာ မနဲထိမ်းထားလိုက်ရတယ် ကျော်ကျော်ကတော့ သူ့ညီတော်မောင်ကို တဆုံးထိုးထဲ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း စစောင့် နေတော့တယ် ကျွန်တော်လဲ အားကျမခံ ညီတော်မောင်ကို ပင့်ထိုးပေးလိုက်တော့ မေသော်မှာ ညီးသံ တွေထွက်လာတယ် “အင်း…အီး..ရှီး..…အီး…ကျွတ်..ကျွတ်” “အား..ကောင်းတယ်….အင့်..ဟင်း…စောင့်..စောင့်တော့” ကျော်ကျော်လဲ နောက်ကနေအားကုန်စောင့် ကျွန်တော်လဲ ပင့်ထိုးနဲ့ မီးကုန်ရန်းကုန် ကြမ်းပါတော့တယ်။ မငြိမ်းနဲ့ ပန်းအိ လဲ ခြောက်ကိုး ပုံစံနဲ့ တစ်ယောက်အဖုတ်တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ယက်နေကြတယ် ကျွန်တော်တို့လဲ စောင့်နေရင်းက ကျင်တက်လာပြီး သုတ်မထိမ်းနိုင်တော့ဘဲ ကိုစီ အသုံးတော်ခံနေတဲ့ အပေါက်ထဲကို သုတ်တွေ တလဟော ပန်းထည့်လိုက်ကာ ကာမအထွတ်အထိတ်သို့ တက်လှန်းရောက်ရှိသွားတော့တယ်….။
မေသော်လဲ အိပ်ယာခင်းကို ကျွစ်ကျွစ်ပါအောင်စုတ်ပြီး စောက်ရည်တွေပန်းထွက်လာတာကို ညီတော်မောင်မှ တဆင့်ခံစားမိ လိုက်တယ် မငြိမ်းနဲ့ပန်းအိ လဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် အဖုတ်ယက်နေရာမှ နှစ်ယောက်လုံး ပြိုင်တူပြီးချင်း သို့ရောက်သွားတော့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လဲ ခြေကုန်လက်ပန်းကျကာ အိပ်မောကြသွားလေ၏။ တစ်ရေးနိုးတော့ ကျွန်တော့် ညီတော်မောင်မှာ တင်းကနဲနေအောင်ခံစားမိတော့ မျက်လုံး မဖွင့်ချင်ဖွင့်ချင်နဲ့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ ပန်းအိ ကျွန်တော့ ညီတော်မောင်ကို သူ့အဖုတ်ထဲထည့်ပြီးအပေါ်ကနေ စိတ်ရှိလက်ရှိ စောင့်နေလေရဲ့ ဘေးဘက်ကြည့်လိုက်တော့ မငြိမ်း နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသွားတယ် ပြီးတော့ မငြိမ်းက ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းကို စွဲယူစုပ်နန်းတာခံလိုက်ရတယ် မငြိမ်းကိုယ်က အငြိမ်မနေဘဲ လှုပ်နေတာတွေ့တော့ ကျော်ကျော်က မငြိမ်းကို လိုးနေမှန်းသိလိုက်တယ် မေသော်ကလဲ ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာတော့။
သူတို့တွေ ဘယ်တုန်းထဲက လုပ်နေတာမလဲမသိဘူး ငါ့တောင်မနိုးဘူးလို့ တွေးနေတုန်း မေသော် က မျက်နှာပေါ်ခွတက် လာတယ်ပြီးတော့ သူ့အဖုတ်နဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ပွတ်တော့တာဘဲ ကျွန်တော်လဲ လျှာကိုထုတ်ပြီး အစိလေး ကိုသိမ်းယက်လိုက်တယ် မေသော်ကလဲ အားကျမခံ စအိုနဲ့ပါ ကျွန်တော့်ရှာကို လိုက်ပွတ်နေတယ် အီး…ရှီး….အင့်…ပန်းအိက ကျွန်တော့်ကို ကြောပေးပြီး အားကုန်စောင့်နေရင်းက “မေသော် ငါ့ဖင်လဲ ယက်ပေးအုံး..အီး..ရှီး..” ပန်းအိလဲစောင့်နေရင်းက မေသော့်ကိုလှန်းပြောလိုက်တယ် မေသော်လဲ ပန်းအိ ဖင်ကားကားကြီးကို ဖြဲကာ စအို ကိုလျှာနဲ့သိမ်းယက်ပေးလိုက် ကျွန်တော် မျက်နှာကို သူ့ဖင်နဲ့ပွတ်လိုက်နဲ့ ကာမ အရသာကို အပြည့်အ၀ ခံစားနေ ကြတော့တယ် ဘေးက ကျော်ကျော်နဲ့မငြိမ်းလဲ အားကုန်စောင့်ရင်း ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ ညိမ်သက်သွားကြတယ် ပန်းအိ လဲ စောင့်နေရင်းကနေ ရပ်လိုက်ပြီး အုန်းဆီ ပုလင်းယူကာ ကျွန်တော့် လိင်တံ ကိုသုတ်လိမ်းလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ သူ့စအိုဝမှာတေ့ကာ ဖြေးဖြေးချင်း ထိုင်ချလိုက်တော့တယ် ကျွန်တော်လဲ ပါးစပ်ကမအားဘဲ မေသော် အဖုတ်ရော စအိုရော ယက်ပေးနေရတော့ ပန်းအိ စအိုထဲ လီးအ၀င်အထွက်ကို မတွေ့ရဘဲဖြစ်နေတော့ စိတ်ထဲ တမျိုးခံစားလာရတယ် အားမလိုအားမရလဲဖြစ်လာတယ်။ ပန်းအိ လဲ ကျွန်တော့်ဖက် မျက်နှာမူလျှက်ပြန်ဖြစ်နေ တော့ မေသော်က ပန်းအိ အဖုတ်ကို ရှာနဲ့ယက်ပေးနေတာ သတိထားမိလိုက်တယ် လီးတချောင်းလုံးလဲ ကျင် တက်လာပြီး ပြီးချင်ချင်ဖြစ်လာတော့ စိတ်ကိုထိမ်းကာ မေသော့် အဖုတ်ကို ရှာနဲ့ အစွမ်းကုန်ယက်ပေးနေလိုက် တယ် “ဖွက်..ဖွက်…အင့်…အင့်…အီး…ဖောင်း..ဖောင်း” ပန်းအိ အားကုန်စောင့်နေပြီ ကျွန်တော်လဲ သုတ်ကိုမနဲထိမ်းကာ မေသော့် အဖုတ်ထဲ ရှာနဲ့လိုးပေးနေမိတယ် ကျွန်တော်လဲ ဘယ်လိုမှ မထိမ်းထားနိုင်တော့ဘဲ ပန်းအိ စအိုထဲသို့ သုတ် တွေကို အစွမ်းကုန်ပန်းထည့်လိုက် တော့တယ် မေသော် လဲ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို အတင်းဖိပွတ်နေတော့။
သူပြီးတော့မယ်ဆိုတာ စိတ်ကသိလိုက် တယ် အဲဒါနဲ့ လျှာကိုအစွမ်းကိုထုတ်ပြီး အစိလေးကိုပါ သိမ်းယက်နေတုန်း ပန်းအိ က ကျွန်တော့်ပေါ်ကနေ ဆင်းပြီးကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ လာအိပ်ချလိုက်တယ် ပြီးတော့ မငြိမ်းက သူ့မျက်နှာပေါ်တက်ခွပြီး အဖုတ်နဲ့ ပွတ်နေတုန်း ကျော်ကျော်က မငြိမ်းစအိုထဲ နောက်ကနေသွင်းနေတာတွေ့လိုက်တယ် မေသော် လဲ အဖုတ်က ပွစိပွစိလုပ်ရင်း ကျွန်တော့်မျက်နှာပေါ် စောက်ရည်တွေ ပန်းချ လိုက်တယ် ပန်းအိကလဲ မငြိမ်းအဖုတ်ကို ယက်လိုက်အစိကို လက်နဲ့ပွတ်လိုက်လုပ်ပေးနေတယ် ကျော်ကျော်လဲ မငြိမ်းစအိုထဲ စိတ်ကြိုက်အားကုန်စောင့် နေတာတွေ့တော့ ကျွန်တော့်ငပဲလဲပြန်ထောင်ထလာတယ် ကျွန်တော်လဲ ကိုယ့်ကို ကိုတောင်အံ့သြသွားတယ် အရင်ဂွေလှိမ့်တာတောင် အဲဒီလောက်ဆို မထောင်နိုင်တော့ဘူး ခုတော့ အစွမ်းကုန်ပြန်ထောင်လာပြန်ပါလေ ရော မငြိမ်းလဲ ကျွန်တော့်ငပဲကိုကြည့်ပြီး ကျော်ကျော့်ကို။
ခဏပြန်ထုတ်ပေးအုံး ဒီမှာ ကောင်းကောင်း ဟာ ပြန်ထောင်လာပြီ အမ နေရာပြောင်းလိုက်အုံးမယ် ကျော်ကျော်လဲ ဘာဆိုတာ သဘောပေါက်သွားကာ မငြိမ်းစအိုထဲက သူ့ငပဲကိုစွဲထုတ်ပေးလိုက်တယ် မငြိမ်းလဲ ကျွန်တော့်ပေါ်တက်ခွပြီး မျက်လုံးလေးမှေးဆင်းကာ သူ့ပိပိမှာကျွန်တော့် ငပဲကိုတေ့ပြီးထိုင်ချ ပြီး ဖိစောင့်နေ တုန်း ကျော်ကျော်ကို လှမ်းကြည့်ကာ “မ ကိုညှပ်ချလေ ကျော်ကျော် မ နောက်ထဲထည့်လိုက်…”ကျော်ကျော်လဲ အချိန်စိုင်းမနေဘဲ မငြိမ်းနောက်နေရာယူပြီး မငြိမ်းစအိုဝ ကို သူ့ငပဲတေ့ပြီးဆက်တိုက်စောင့် တော့တယ် ဒီတိုင်းလုပ်နေရင်း မငြိမ်းကညောင်းလာပြီဆိုတာတာနဲ့ ကျော်ကျော်က မငြိမ်းစအိုထဲက သူ့ငပဲကို စွဲထုတ်ပေးလိုက်တော့ မငြိမ်းကလဲ သူ့အဖုတ်ထဲက ကျွန်တော့်ငပဲကို စွဲထုတ်ကာ မက်တက်ရပ်ပြီး ကျွန်တော့် ကိုကြောပေးကာ လှည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်လဲ ဘာလုပ်မလဲကြည့်နေတုန်း သူ့စအိုဝမှာ ကျွန်တော့ ငပဲကို တေ့ပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်။
အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော်ရောကျော်ကျော်ရောသဘောပေါက်ပြီး ကျော်ကျော်ကမငြိမ်း အဖုတ်ထဲသူ့ငပဲထိုးထဲ့ကာအားကုန်စောင့်တော့တယ် မငြိမ်းလဲ အသံစုံထွက်လာပြီး “မြန်မြန်စောင့်ပေးတော့ အမ ပြီးတော့မယ် မြန်မြန်စောင့်…အား…ရှီး…စောင့်…စောင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းစောင့် အမ ကိုအားမနာနဲ့စောင့်တော့ အား..အီး…အင့်…အီး…အမေရေ…အား..အား..ထွက်ပြီ…အား….အမေရေ…အား…. “အီး..ရှီး…ကောင်းလိုက်တာ…ဒီတစ်ခါ အကောင်းဆုံးဘဲ ဟင်း….” မငြိမ်းလဲညိမ်ကြသွားတော့ ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လဲ ဒီတိုင်းညိမ်နေပေးထားလိုက်ရတယ် ကျွန်တော်တို့တော့ မပြီးသေးတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မျက်စပစ်ပြီး ဘာဆက်လုပ်မလဲပေါ့ အဲဒီတော့ ဘေးနားက ပန်းအိ က “မငြိမ်း နင်ပြီးရင် ဆင်းတော့လေ ငါလဲစမ်းကြည့်ချင်တယ် နင်ခံရတာတော်တော်ကောင်းလား” “မေသော်ပြောပြတုန်းက သိပ်မထူးဘူးထင်တာ လက်တွေ့ခံစားကြည့်တော့မှ ဆွေမျိုးမေ့အောင်ကို ကောင်းတာ။
၀တောင် မ၀ချင်ဘူး ထပ်ခံချင်သေးတယ် အဲဒီပုံစံမျိုးနဲ့ “ခုတော့ ငါ့အလှဲ့ပေးပါအုံး ငါလဲစမ်းချင်သေးတယ် နင်ဆင်းတော့လေ” မငြိမ်းလဲ မဆင်းချင်ဆင်းချင်နဲ့အင်တင်တင်လုပ်နေတုန်း ကျော်ကျော်က မငြိမ်းအဖုတ်ထဲက ငပဲကို စွဲထုတ် လိုက်တော့ မငြိမ်းက “ဟာ..ဒီမှာ ဇိမ်ခံနေတာကို နင်က ဇွတ်စွဲထုတ်တာဘဲ ခဏလေးထည့်ထားတော့ ဘာဖြစ်မှာ မို့လို့လဲ” မငြိမ်းလဲ အားမလိုအားမရလေသံနဲ့ ကျော်ကျော့်ကို အပြစ်တင်တော့ ပန်းအိက “မငြိမ်းတော်ပြီလေဟာ ငါ့အလှည့်ပေးအုံး ငါလဲခံချင်သေးတယ် ကျော်ကျော့်ကို အပြစ်တင်မနေနဲ့ လာ ကျော်ကျော် ပန်းအိထဲ ပြောင်းထည့်” ကျော်ကျော် က ခဏ “ခဏ ငါတို့ မက်တပ် လုပ်ကြည့်ကြရအောင် ဟေ့ကောင် ကောင်းကောင်း သဘောတူလား” “အေး ကောင်းတယ် ငါလဲစမ်းကြည့်ချင်တယ် ဒါပေမဲ့” “ဘာ ဒါပေမဲ့လဲ….” “ငါတော့ ပြိုင်းနေသလိုဘဲ နောက်နေ့မှ စမ်းပါလားကွာ ခုတော့ မငြိမ်းကို လုပ်သလိုဘဲ လုပ်ကြတာပေါ့”။
ပန်းအိကလဲ “ငါလဲ မက်တပ် မနေတတ်ဘူးနော် ရိုးရိုးလဲ စလုပ်ပါလား နောက်မှ လုပ်လဲရသားနဲ့” ကျော်ကျော်လဲ အင်တင်တင်နဲ့ ကုတင်ပေါ် လွတ်တဲ့နေရာမှာ ပက်လက်လှန်ပြီး ငပဲကိုထောင်ပေးထားလိုက် တယ်။ မငြိမ်းလဲ ကျော်ကျော်ပေါ်ခွပြီး သူ့အဖုတ်နဲ့ ကျော်ကျော့်ငပဲပေါ်တေ့ထိုင်ချလိုက်ပြီး ဖိစောင့် ရင်း ကျွန်တော့်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်လဲ ပန်းအိ ဘာလိုတယ်ဆိုတာ သိနေတော့ ပန်းအိ နောက် မှာနေရာယူပြီး သူ့စအိုထဲ ငပဲကို ချော့သွင်းသွင်းလိုက်တော့ ပန်းအိစီက အသံထွက်လာတယ် “အီး…တော်တော်ကြပ်တယ်..ဖြေးဖြေးသွင်းနော် ဖြေး..ဖြေး..” ကျွန်တော်လဲ အရှိန်ရလာတော့ ပန်းအိလဲကောင်းလာလို့နဲ့တူတယ် သူကပါပြန်စောင့်လာတယ် ကျွန်တော်လဲ ကျော်ကျော့်လှမ်းကြည့်လိုက်တာ့ ခေါင်းငြိမ့်ပြတာနဲ့ အရှိန်တင်ပြီး အားကုန်ကြုံးစောင့်တော့တယ်။
ကျော်ကျော် လဲ ကော့ထိုးထိုးရင်း ပြန်စောင့်နေတော့ ပန်းအိလဲ ဖိချလိုက်ပြန်ကော့တင်လိုက်နဲ့ ၀င်လာသမျှကို စည်းချက် ကြကြတုန့်ပြန်တတ်လာတယ် “အင့်…အီး..အင့်…ဟင်း…အား…အင့်…အီး…စောင့်..စောင့်… ပန်းအိ ပြီးတော့မယ် စောင့်….အီး…ရှီး….”ကျွန်တော်လဲ အားကုန်ကြုံးစောင့်ရင်း လိင်တံတစ်လျှောက်ကျင်တက်လာကာ မထိမ်းနိုင်တော့ဘဲ ပန်းအိ စအို ထဲကို သုတ်ရည်တွေပန်းထည့်ရင်း ပြီးဆုံးခြင်းကို ရောက်သွားတော့တယ် ကျွန်တော်လဲ လိင်တံကို ပန်းအိ စအို ထဲကထုတ်ကာ မငြိမ်းဘေးနားဝင်လှဲရင်းအမောဖြေနေတုန်း “အီး…ပန်းအိ စောင့်…စောင့် ကျွန်တော်လဲ ပြီးတော့မယ် စောင့်..စောင့်…အီး..” “အင့်..ရှီး…ကျော်ကျော်ရေ…အား…အမေ…အား…အား…..” အသံစုံထွက်ကာ နှစ်ယောက်သားညိမ်ကျသွားတော့မှ ကျွန်တော်လဲ မျက်ခွံတွေလေးလာပြီး မှေးကနဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းသိုံရောက်ရှိ သွားလေတော့သည်….ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ကွုံခဲတဲ့ညတည